အသုံးပြုရန် စည်းကမ်းချက်များ | Muslima.com
(အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက် ၂၀၂၁ တွင် နောက်ဆုံး ဖြည့်စွက်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်)
၁.၁ အသုံးပြုရန် စည်းမျဉ်းများကို လက်ခံခြင်း
ဤဝဘ်ဆိုက်ကို အသုံးပြုနိုင်ရန်မှာ ဤအသုံးပြုရန် စည်းမျဉ်းများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု ဖော်ပြချက် တို့ကို သင့်လက်ခံမှုအပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ သင်က မန်ဘာအဖြစ် စာရင်းသွင်းထားခြင်း ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ ဤဝဘ်ဆိုက်ကို ဆက်လက်အသုံးပြုပါက သင်သည် ဤအသုံးပြုရန် စည်းမျဉ်းများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု ဖော်ပြချက်တို့ကို လက်ခံသည်ဟု ယူဆမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤအသုံးပြုရန် စည်းမျဉ်းများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု ဖော်ပြချက်တို့ကို မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ပြောင်းလဲခြင်း ရှိနိုင်ပါသည်။ ပြောင်းလဲမှုကို ပြုလုပ်ပါက အသုံးပြုရန် စည်းမျဉ်းများနှင့် ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု ဖော်ပြချက်တို့၏ ပြင်ဆင်ထားသော ဗားရှင်းကို ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် ဖော်ပြထားမည် ဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုရန် စည်းမျဉ်းများနှင့် ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု ဖော်ပြချက်တို့ကို အခါအားလျော်စွာ ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်မှာ သင့်တာဝန်သာ ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍သင်သည် ဝဘ်ဆိုက်၏ မန်ဘာတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အသုံးပြုရန် စည်းမျဉ်းများနှင့် ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု ဖော်ပြချက်တို့တွင် ပြောင်းလဲမှုသည် အရေးပါသော ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပါက အပြောင်းအလဲများကို သင့်အားအသိပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့ အကောင်းဆုံး ကြိုးစားလုပ်ဆောင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ဤအသုံးပြုရန် စည်းမျဉ်းများကို သင်သဘောမတူပါက ဤဝဘ်ဆိုက်ကို သင်အသုံးမပြုရပါ။
၁.၂ နေထိုင်ရာနေရာအပေါ် မူတည်သော အသုံးပြုရန် စည်းမျဉ်းများ
(က) သင်သည် အီးယူနိုင်ငံတစ်ခုတွင် နေထိုင်သူဖြစ်လျှင် အပိုဒ်ငယ် ၁၆.၇ နှင့် အပိုဒ်ငယ် ၁၈.၈ (က) တို့သည် သင်နှင့်သက်ဆိုင်ပါသည် (သို့ရာတွင် အပိုဒ်ငယ် ၁၈.၈ (ခ) သည် မသက်ဆိုင်ပါ)။
(ခ) သင်သည် အီးယူနိုင်ငံမဟုတ်သော နိုင်ငံတစ်ခုတွင် နေထိုင်သူဖြစ်လျှင် အပိုဒ်ငယ် ၁၈.၈ (ခ) သည် သင်နှင့် သက်ဆိုင်ပါသည် (သို့ရာတွင် အပိုဒ်ငယ် ၁၈.၈ (က) သည် မသက်ဆိုင်ပါ)။
(ဂ) သင်သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ အရီဇိုးနား၊ ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ ကွန်နက်တီကက်၊ အီလီနွိုက်စ်၊ အိုင်အိုဝါ၊ မင်နီဆိုးတား၊ နယူးယောက်ခ်၊ မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား၊ အိုဟိုင်းရိုး သို့မဟုတ် ဝစ်ကွန်ဆင် ပြည်နယ်များတွင် နေထိုင်သူဖြစ်လျှင် အပိုဒ်ငယ် ၁၆.၃ (က) သည် သင်နှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။
(ဃ) သင်သည် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုရှိ ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ အီလီနွိုက်စ်၊ နယူးယောက်ခ် သို့မဟုတ် အိုဟိုင်းရိုး ပြည်နယ်များတွင် နေထိုင်သူဖြစ်လျှင် အပိုဒ်ငယ် ၁၆.၃ (ခ) သည် သင်နှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။
၁.၃ အသုံးပြုသူ သဘောတူညီချက်
ဤအသုံးပြုရန် စည်းမျဉ်းများသည် ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဝဘ်ဆိုက်ကို သင်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်နှင့် Cupid Media Pty Ltd ("ကုမ္ပဏီ") အကြား သဘောတူညီမှု ("သဘောတူညီမှု") ကို ဖြစ်စေပါသည်။
ဤဝဘ်ဆိုက်ကို ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် ကုမ္ပဏီမှ စီမံအုပ်ချုပ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီကို အီးယူတွင်မဟုတ်သော လုပ်ငန်းများအတွက် အထူးအစီအစဉ်ဖြစ်သည့် အီး-ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ဗွီအေတီ (VAT on e-Services, VoeS) အရ ဥရောပသမဂ္ဂ တန်ဖိုးထပ်တိုးအခွန် (European Union Value Added Tax) အတွက် မှတ်ပုံတင်ထားပါသည်။ အောက်ပါ မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်မဆို ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် -
အွန်လိုင်း ပံ့ပိုးရေးပုံစံ - ဤနေရာတွင်နှိပ်ပါ (ဝန်ဆောင်မှုကို အလျင်မြန်ဆုံး ရရှိရန်အတွက် ဤနည်းလမ်းကို အသုံးပြုပါ)
အီးမေးလ် - team@Muslima.com
စာပို့ရန် - Muslima.com, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australia
ဒါရိုက်တာ - Alexey Pleshakov, William Alena
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သို့မဟုတ် သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အား ရယူပုံနှင့် အသုံးပြုပုံတို့နှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းမေးမြန်းရန် ဆက်သွယ်လိုပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု ဖော်ပြချက် ကို ကြည့်ပေးပါ။
သင်သည် ဥရောပသမဂ္ဂ နိုင်ငံတစ်ခုတွင် နေထိုင်ခြင်းဖြစ်ပါက အချက်အလက် ကာကွယ်ရေး ကိစ္စများအတွက် Cupid Media ၏ ဥရောပသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် VeraSafe ကို ခန့်အပ်ထားပါသည်။ အထက်ပါ သတင်းအချက်အလက်ကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အား ဆက်သွယ်ခြင်းအပြင် သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသော ကိစ္စရပ်များအတွက် VeraSafe ကိုလည်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့သော စုံစမ်းမေးမြန်းမှုတစ်ခုကို ပြုလုပ်ရန် အောက်ပါပုံစံကို အသုံးပြု၍ VeraSafe ကို ဆက်သွယ်ပေးပါ - https://www.verasafe.com/privacy-services/contact-article-27-representative
တနည်းအားဖြင့် အောက်ပါလိပ်စာများတွင်လည်း VeraSafe ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် -
၂.၁ လိုအပ်ချက် ပြည့်မီမှု
ဝန်ဆောင်မှုရရန်အတွက် မန်ဘာအဖြစ် စာရင်းသွင်းရန် သို့မဟုတ် ဤဝဘ်ဆိုက်ကို အသုံးပြုရန်အတွက် သင်သည် အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီး ဖြစ်ရပါမည်။ ဝဘ်ဆိုက်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင်သည် ဤသဘောတူညီမှုကို ပြုလုပ်ရန်နှင့် အသုံးပြုရန် စည်းမျဉ်းများအားလုံးကို လိုက်နာရန်အတွက် အခွင့်အရေး၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် လုပ်နိုင်သည့်စွမ်းအားရှိကြောင်း အခိုင်အမာပြောဆို၊ ဆောင်ရွက်၊ အာမခံခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မန်ဘာတစ်ဦးအဖြစ် စာရင်းသွင်းခြင်းဖြင့် သင်သည် အခမဲ့ရော၊ အခမဲ့မဟုတ်သည့် ပုံစံဖြင့်ပါ အသုံးပြုနိုင်သော ဝဘ်ဆိုက်နှင့်ပတ်သက်၍ ကုမ္ပဏီဖြင့် စာချုပ်တစ်ခု ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သင့်မန်ဘာဝင်ခြင်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို အဆင့်မြှင့်၍ ရနိုင်ပါသည်။ သင့်စာချုပ်တွင် အချို့သော လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် စည်းမျဉ်းများအပြင် ငွေပေးချေမှု နည်းလမ်းတစ်ခုကိုပါ ရွေးချယ်ရန် လိုအပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်မြှင့်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်၏ နောက်ဆုံးအဆင့်မှ "ငွေပေးချေမှု ပြုလုပ်မည်" ခလုတ်ကို နှိပ်ခြင်းဖြင့် သင်သည် ရွေးချယ်ထားသော အဆင့်မြှင့်မည့်နည်းလမ်းကို ပေးထားသော ဈေးနှုန်းဖြင့် စာချုပ်တစ်ခုအား ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
(က) ဝန်ဆောင်မှုရရန် မန်ဘာဝင်ခြင်းကို အခမဲ့ ရရှိနိုင်ပါသည်။ အခမဲ့ မန်ဘာဝင်ခြင်းဖြင့် သင်သည် ဝန်ဆောင်မှု၏ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် အချို့သော လုပ်ဆောင်ချက်များကိုသာ အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ထပ် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ရယူအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် သင်သည် ဝန်ဆောင်မှုကို အခပေးရယူသူ ဖြစ်ရပါမည်။ သို့ဖြစ်၍ အဆိုပါ နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်ချက်များကို သင်အသုံးပြုနိုင်ရန်မှာ သက်ဆိုင်ရာ အခကြေးငွေများအား ပေးချေမှုအပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
(ခ) ဤဆိုက်မှ အသုံးပြုသူများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် သင်သည် စွဲချက်တင်ထိုက်သော ရာဇဝတ်မှုတစ်ခု သို့မဟုတ် အလွန်ဆိုးရွားသော ပြစ်မှုကြီးတစ်ခုကို ကျူးလွန်ခဲ့ပါက မန်ဘာအဖြစ် လျှောက်ထားရန် သို့မဟုတ် မန်ဘာဖြစ်လာရန် အခွင့်မရှိကြောင်းကို သိရှိနားလည် သဘောတူပါသည်။ မန်ဘာဝင်ရန် လျှောက်ထားခြင်းဖြင့် သင်သည် စွဲချက်တင်ထိုက်သော ရာဇဝတ်မှုတစ်ခု သို့မဟုတ် အလွန်ဆိုးရွားသော ပြစ်မှုကြီးတစ်ခုကို ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်း၊ သင့််အား မည်သည့်အစိုးရ အာဏာပိုင်အဖွဲ့ကမျှ လိင်အကြမ်းဖက်သူအဖြစ် စာရင်းသွင်းထားရန် လိုအပ်ခြင်းမရှိကြောင်း အာမခံကာ အခိုင်အမာ ပြောဆိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
(ဂ) ကုမ္ပဏီသည် လက်ရှိတွင် နောက်ကြောင်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ပေးထားသော သတင်းအချက်အလက်များကို အတည်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် ယင်း၏အသုံးပြုသူများအား ရာဇဝတ်ပြစ်မှု စစ်ဆေးခြင်းတို့ကို လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အနေဖြင့် မပြုလုပ်ကြောင်း သင်နားလည်သိရှိပါသည်။ သင်သည် မည်သည့်အာမခံချက်ကိုမျှ မချိုးဖောက်ကြောင်း သေချာစေရန်နှင့် အခိုင်အမာ ပြောဆိုချက် တခုခုသည် မှားယွင်းမှုရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့တွင် မန်ဘာများအားလုံးကို စုံစမ်းမှုများပြုပိုင်ခွင့်နှင့် နောက်ကြောင်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့ စုံစမ်းမှုကို ပြုလုပ်ရန် ကုမ္ပဏီကို ခွင့်ပြုကြောင်း သင်က သဘောတူညီထားပြီး အကယ်၍ သင်သည် အာမခံချက် တခုခုကို ချိုးဖောက်ခြင်း သို့မဟုတ် သင့်အခိုင်အမာ ပြောဆိုချက်သည် မှားယွင်းကြောင်း တွေ့ရှိရခြင်း ရှိပါက သင့်မန်ဘာဝင်ခြင်းကို ငြင်းပယ်ရန် နှင့်/သို့မဟုတ် အဆုံးသတ်ရန် ကုမ္ပဏီတွင် အခွင့်အရေးရှိပါသည်။
၂.၄ ပုံမှန်ရယူခြင်း အစီအစဉ်များနှင့် ကျသင့်ငွေများ
ပုံမှန်ရယူခြင်း အစီအစဉ်များနှင့် ယင်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ ကျသင့်ငွေများကို "မန်ဘာအဆင့်ကိုမြှင့်မည်" စာမျက်နှာတွင် တွေ့နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ ပုံမှန်ရယူမှု ကျသင့်ငွေများသည် အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပြီး ယင်းအပြောင်းအလဲများကို ယခင်က ညွှန်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော ဝဘ်ဆိုက်၏ စာမျက်နှာပေါ်တွင် တွေ့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် နယ်မြေများအကြားတွင် ပုံမှန်ရယူမှု ကျသင့်ငွေများနှင့် ပတ်သက်၍ မတူညီမှုများရှိနိုင်ပြီး ယင်းမတူညီမှုများသည် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် နယ်မြေတစ်ခုစီအတွက် ကျသင့်သော ကုန်ကျစရိတ်များနှင့် အဆိုပါ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် နယ်မြေနှင့် သက်ဆိုင်သော အခြားစီးပွားရေးဆိုင်ရာ အခြေအနေများကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း သင်နားလည်သိရှိပါသည်။
၂.၅ အခမဲ့ စမ်းသုံးကာလများနှင့် အခြားအရောင်းမြှင့်တင်မှုများ
အခပေးဝန်ဆောင်မှုများအား အခမဲ့ ရယူသုံးစွဲနိုင်စေသော မည်သည့် အခမဲ့ စမ်းသုံးကာလ သို့မဟုတ် အခြားအရောင်းမြှင့်တင်မှုမဆိုကို အခမဲ့စမ်းသုံးကာလတွင် သတ်မှတ်ထားသော အချိန်အတွင်း အသုံးပြုရပါမည်။
(က) အချို့သော ဝန်ဆောင်မှုများကို အခမဲ့ ရရှိနိုင်ပြီး အခပေးဝန်ဆောင်မှုများကိုမူ အကျုံးဝင်သော ပုံမှန်ရယူမှုတစ်ခု ရှိထားသည့် သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့် ကျသင့်ငွေ ပေးချေမှုကို ပြုလုပ်ထားသည့် မန်ဘာများအတွက်သာ ရရှိနိုင်သည်ကို သင်နားလည်သိရှိပါသည်။ ပုံမှန်ရယူမှုများကို မန်ဘာအဆင့်မြှင့်သည့် စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသော ဈေးနှုန်းများ၊ အချိန်ကာလများနှင့် ငွေပေးချေမှု နည်းလမ်းများအတိုင်း ရယူနိုင်ပါသည်။ မန်ဘာအဆင့်မြှင့်သည့် စာမျက်နှာတွင် ပြထားသော ငွေကြေးပုံစံအတိုင်း ဈေးနှုန်းများကို ဖော်ပြထားပြီး အခြားနည်းဖြင့် ဖော်ပြထားသည်မှလွဲ၍ ယင်းတွင် သက်ဆိုင်ရာ အခွန်များအားလုံး ပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါသည်။
(ခ) သင့်မန်ဘာဝင်ခြင်းကို အလိုအလျောက် သက်တမ်းတိုးမည် ဖြစ်ပါသည်။ အလိုအလျောက် သက်တမ်းတိုးခြင်းကို မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို သင်ပိတ်ထားနိုင်ပါသည်။ ဝဘ်ဆိုက်၏ အကူအညီကဏ္ဍမှ လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်လုပ်ခြင်းဖြင့် အလိုအလျောက် သက်တမ်းတိုးခြင်းကို ပယ်ဖျက်နိုင်ပါသည်။
(ဂ) သင်ရွေးချယ်သော ပုံမှန်ရယူမှု အစီအစဉ်အတွက် ကျသင့်သော ပုံမှန်ရယူမှု ကျသင့်ငွေများအား ပေးချေမှုအတွက် အကြိမ်ကြိမ်ပြန်လည် ပြုလုပ်နိုင်သော ကျသင့်ငွေကောက်ခံခြင်း ပုံစံတစ်ခုကို ကျွန်ုပ်တို့ ပေးထားခြင်းရှိပါက သင်သည် အဆိုပါ ကျသင့်ငွေများကို (သင့်လျော်သော အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း) အကြိမ်ကြိမ်ပြန်လုပ်သော ပုံစံဖြင့် ကောက်ခံနိုင်ရန် ကုမ္ပဏီအား ယခုမှစ၍ ခွင့်ပြုပါသည်။ အဆိုပါ အခြေအနေတွင် ယင်းခွင့်ပြုချက်ကို ရပ်ဆိုင်းကြောင်း သင့်ထံမှ စာဖြင့်ရေးသား အသိပေးမှုကို လက်ခံရရှိပါက ကုမ္ပဏီသည် ကျသင့်ငွေများ ကောက်ခံခြင်းကို ရပ်တန့်မည် ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ မည်သည့်အသိပေးမှုမဆိုသည် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မပြုမီက ပြုလုပ်ခဲ့သော ကောက်ခံမှုများအပေါ်တွင် သက်ရောက်ခြင်း မရှိစေရပါ။ မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆို ပုံမှန်ရယူမှုအတွက် ကျသင့်ငွေများကို မှန်ကန်စွာကောက်ခံရန် ဖြစ်နိုင်စေသော လက်ရှိအတိုင်းဖြစ်ပြီး ပြည့်စုံတိကျသည့် သတင်းအချက်အလက်ကို သင်ကပေးရမည်ဖြစ်ကာ ယင်းသတင်းအချက်အလက်ကို ပုံမှန်အပ်ဒိတ်လုပ်ပေးရပါမည်။
(ဃ) မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ကျွန်ုပ်တို့သည် ပုံမှန်ရယူမှုတစ်ခုအတွက် ဈေးနှုန်းကို အပြောင်းအလဲ လုပ်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဈေးနှုန်းအသစ်အကြောင်း အသေးစိတ်အချက်များကို ဆိုက်ပေါ်တွင် တင်ပြီးနောက်တွင် သင်သည် ပုံမှန်ရယူမှု အသစ်တစ်ခုကို လျှောက်ထားပါက (ယင်းသည် သင့်ပထမဆုံး ပုံမှန်ရယူမှု ဟုတ်သည်ဖြစ်စေ၊ မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ) နှုန်းထားအသစ်ဖြင့် ကျသင့်ပါမည်။ ရှိနှင့်ပြီးသော ပုံမှန်ရယူမှုအား အလိုအလျောက် သက်တမ်းတိုးခြင်းများသည် ဈေးနှုန်းအဟောင်းအတိုင်း ဆက်လက်ရှိနေပါမည်။
(င) သံသယဖြစ်ဖွယ် ငွေပေးချေသည့် လုပ်ဆောင်မှုကို တွေ့ရပါက သင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်မှတဆင့် ငွေပေးချေမှုကို ယာယီဖြစ်စေ၊ အမြဲတမ်းဖြစ်စေ ဆိုင်းငံ့ထားရန် နှင့်/သို့မဟုတ် အဆိုပါ ပုံမှန်မဟုတ်သော လုပ်ဆောင်ချက်ကို သတင်းပို့ရန် နှင့်/သို့မဟုတ် နောက်ထပ် သတင်းအချက်အလက်ကို ရရှိစေရန်အတွက် သင်၊ သင့်ဘဏ် သို့မဟုတ် အခြားမည်သည့် သက်ဆိုင်ရာ တတိယအဖွဲ့အစည်းကိုမဆို ဆက်သွယ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင် အခွင့်အရေးရှိပါသည်။
၂.၇ ငွေပေးချေသည့် ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုရန် စည်းမျဉ်းများ
တတိယအဖွဲ့အစည်း ငွေပေးချေသည့် ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုရာတွင် သင်သည် အဆိုပါ ငွေပေးချေသည့် ဝန်ဆောင်မှုများအား အသုံးပြုရန် စည်းမျဉ်းများကို လက်ခံလိုက်နာရပါမည်။
၂.၈ ရွှေ၊ ပလက်တီနမ်နှင့် စိန်အဆင့် မန်ဘာဝင်ခြင်းများအတွက် စည်းကမ်းချက်များ
အခပေး သုံးစွဲသူများကို ရွှေ၊ ပလက်တီနမ်နှင့် စိန်အဆင့် မန်ဘာများအဖြစ် ခွဲထားကြောင်း သိရှိထားပေးပါ။ ပလက်တီနမ်နှင့် စိန်အဆင့် အသုံးပြုသူများကသာ အဆင့်မြင့် တွဲဖက်ပေးခြင်း၊ မက်ဆေ့ဂျ်များကို ဘာသာပြန်ခြင်းနှင့် ရှာဖွေမှု ရလဒ်များနှင့် နေရာအကျယ် နှစ်ဆရခြင်းတို့ကို ရနိုင်ပါသည်။ မက်ဆေ့ဂျ်ကို ဦးစားပေးဖော်ပြခြင်း၊ ဦးစားပေး ပံ့ပိုးမှုပေးခြင်းနှင့် ပရိုဖိုင်များကို ရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင် အသားပေး ဖော်ပြခြင်းတို့ကို စိန်အဆင့် အသုံးပြုသူများကသာ ရရှိနိုင်ပါသည်။
၂.၉ စကားဝှက် လုံခြုံရေး
မန်ဘာစာရင်းသွင်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်၏ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် သင်သည် စကားဝှက်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ရန် လိုအပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ အလွယ်တကူ မခန့်မှန်းနိုင်သော စကားဝှက်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ရန်နှင့် သင့်စကားဝှက်ကို ဘေးကင်းစွာ ထားရှိရန်မှာ သင့်တာဝန်သာဖြစ်ပြီး ဝဘ်ဆိုက်အား သင့်အသုံးပြုခွင့် သို့မဟုတ် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ကို မည်သည့်တတိယ အဖွဲ့အစည်းကိုမျှ လွှဲပေးခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းကို မပြုလုပ်ရန် သင်သဘောတူညီပါသည်။ သင့်အကောင့်သည် လုံခြုံမှုမရှိတော့ဟု ယုံကြည်ရန် အကြောင်းရင်းရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့အား ချက်ချင်းအကြောင်းကြားရမည်ဖြစ်ကာ သင့်အကောင့် သတင်းအချက်အလက်ကို အပ်ဒိတ်လုပ်ခြင်းဖြင့် သင့်စကားဝှက်ကို အလျင်အမြန် ပြောင်းလဲရပါမည်။
၂.၁၀ သက်သေခံချက်ကို အတည်ပြုခြင်း
အောက်ပါတို့ကို အတည်ပြုရန်အတွက် သက်သေခံအထောက်အထား ပုံစံတစ်ခုကိုပေးရန် အခါအားလျော်စွာ ကျွန်ုပ်တို့ တောင်းဆိုခြင်း ရှိနိုင်ပါသည် -
(က) သင့်သက်သေခံ အထောက်အထား
(ခ) သင်ပေးထားသော သတင်းအချက်အလက်
(ဂ) သင့်ငွေပေးချေမှု သို့မဟုတ် ကျသင့်ငွေကောက်ခံသည့် သတင်းအချက်အလက် နှင့်/သို့မဟုတ်
(ဃ) ကျွန်ုပ်တို့၏ အသုံးပြုရန် စည်းမျဉ်းများအား သင့်လိုက်နာမှု။
ဝန်ဆောင်မှုသည် မိတ်ဆွေဖွဲ့မှု သို့မဟုတ် ဆက်ဆံရေးဖွဲ့မှုကို ရှာဖွေလိုသော သို့မဟုတ် မရှာဖွေလိုသော မန်ဘာများအကြား ဆက်သွယ်မှုကို ပြုလုပ်ပေးသည့် အင်တာနက် သတင်းအချက်အလက် ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသည် အိမ်ထောင်ရေး စေ့စပ်ညှိနှိုင်းပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှု၊ အိမ်ထောင်ဖက်ရှာဖွေနေသည့် သတို့သမီး ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် အတွဲတွဲဖက်ပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခု မဟုတ်ပါ။ ကုမ္ပဏီတွင် အခြားမန်ဘာ သို့မဟုတ် မန်ဘာများအား သင့်အတွက် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းပေးရန် တာဝန်မရှိပါ။
၄။ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်း
၄.၁ အန္တရာယ်ကို ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူခြင်း
ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဝဘ်ဆိုက်ကို အသုံးပြုရာတွင် ဖြစ်နိုင်သော အန္တရာယ်အတွက် အပြည့်အဝ ကိုယ်တိုင် တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်သည်ကို သင်နားလည်သိရှိပါသည်။
၄.၂ တိကျသော သတင်းအချက်အလက်
ဝန်ဆောင်မှု၊ ဝဘ်ဆိုက်နှင့် ကုမ္ပဏီသို့ သင်ပေးထားသော သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဓာတ်ပုံ/ဓာတ်ပုံများသည် မည်သည့်ပုံစံဖြင့်မဆို တိကျကြောင်း၊ ဤသဘောတူညီချက်ကို ချိုးဖောက်ခြင်း မရှိကြောင်းနှင့် မည်သည့်နည်းနှင့်မဆို မည်သူ့ကိုမျှ ထိခိုက်ခြင်းမရှိကြောင်း သင်က အခိုင်အမာ ပြောဆိုကာ အာမခံမှုအား ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အထက်ပါတို့သာဟု ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိဘဲ သင်သည် အောက်ပါမည်သည့် ပုံကိုမဆို ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်သို့ပေးပို့ခြင်း သို့မဟုတ် တင်ခြင်းကို မပြုလုပ်ရပါ -
• သင်မဟုတ်သော အခြားမည်သူမဆို၏ ပုံများ
• သင်ပါဝင်ခြင်းမရှိသော အခြားအရာများ၏ပုံများ
• ကာတွန်းပုံ သို့မဟုတ် သရုပ်ဖော်ပုံ (ယင်းသည် သင့်ပုံဖြစ်လျှင်ပင်)။
၄.၃ လျှို့ဝှက်အဖြစ် မသတ်မှတ်ထားသော သတင်းအချက်အလက်
(ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု ဖော်ပြချက်တွင် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း သင့်အမည် အပြည့်အစုံ၊ စာပို့ရန်လိပ်စာ၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ် အစရှိသည်တို့ ပါဝင်ခြင်းရှိနိုင်သော) ကိုယ်ရေးအချက်အလက် အပါအဝင် သင်ပေးထားသော မည်သည့်အရာ သို့မဟုတ် မည်သည့် သတင်းအချက်အလက်မဆိုကို လျှို့ဝှက်မထားရှိသောအရာ သို့မဟုတ် တစ်ဦးတည်းပိုင် မဟုတ်သောအရာအဖြစ် မှတ်ယူမည်ဖြစ်ကာ အဆိုပါအရာ သို့မဟုတ် သတင်းအချက်အလက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု ဖော်ပြချက်ပါ စည်းမျဉ်းများနှင့် မည်သည့်တည်ဆဲ ဥပဒေနှင့်အညီမဆို သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အား အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုထားသော အတိုင်းအတာအထိ အတားအဆီးမရှိ အသုံးပြုခြင်း ရှိနိုင်သည်ကို သင်သဘောတူပါသည်။ အတိအကျအားဖြင့် (မည်သည့်ပရိုဖိုင် သတင်းအချက်အလက်၊ ဓာတ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယို သို့မဟုတ် အသံဖမ်းယူမှုများ အပါအဝင်) အရာများ သို့မဟုတ် သတင်းအချက်အလက်များအား ကုမ္ပဏီမှပိုင်ဆိုင်ကာ စီမံအုပ်ချုပ်သော အခြားမည်သည့် သက်ဆိုင်ရာ ချိန်းတွေ့သည့်ဆိုက်သို့မဆို သင့်ပရိုဖိုင်အား ကူးယူရာတွင် ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် Dating Group တွင် ပါဝင်သူက အသုံးပြုခြင်းကို သင်က သဘောတူညီခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သင်ပေးထားသော ယင်းကဲ့သို့ မည်သည့်အရာ သို့မဟုတ် သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆို အခြားမန်ဘာများ သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်ကို အသုံးပြုသူများက ဖတ်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်ကို သင်သိရှိနားလည်ပါသည်။
၄.၄ နိုင်ငံရပ်ခြားမှ ကြည့်ရှုနိုင်သော သတင်းအချက်အလက်
(က) ကျွန်ုပ်တို့အား သင်ပေးထားသော မည်သည့်ပရိုဖိုင် သတင်းအချက်အလက်မဆိုကို ကြည့်ရှုသူသည် မည်သည့်နေရာတွင် နေထိုင်စေကာမူ သင့်ပရိုဖိုင်ပေါ်တွင် အများပြည်သူက မြင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ပရိုဖိုင်တစ်ခုကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံရပ်ခြားမှ လက်ခံရယူသူများသည် သင့်ပရိုဖိုင်အား ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်ကို သင်သိရှိနားလည်ပါသည်။
(ခ) ကုမ္ပဏီသည် သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကို သိမ်းဆည်းရန်အတွက် ကမ္ဘာအနှံ့မှ ဆာဗာများကို အသုံးပြုပြီး ယင်းတို့သည် သင်နေထိုင်ရာနိုင်ငံမဟုတ်သည့် နိုင်ငံတစ်ခုတွင် ရှိနေနိုင်ပါသည်။
(ဂ) ကုမ္ပဏီသည် တစ်ဦးချင်းစီအား နောက်ကြောင်းစစ်ဆေးမှုနှင့် ပြစ်မှုမှတ်တမ်း စစ်ဆေးမှုများကို ပြုလုပ်ရန်အတွက် ကမ္ဘာအနှံ့မှ ကန်ထရိုက်တာများကို အသုံးပြုပြီး ယင်းတို့သည် သင်နေထိုင်ရာနိုင်ငံမဟုတ်သော နိုင်ငံတစ်ခုတွင် ရှိနေနိုင်ပါသည်။
(ဃ) ဖောက်သည်ပံ့ပိုးမှုကို ပေးနိုင်ရန်၊ နောက်ကွယ်မှ ဆောင်ရွက်ချက်များကို ပြုလုပ်ပေးနိုင်ရန်၊ အတုလုပ်မှု ကာကွယ်ရေး ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ရန် သို့မဟုတ် သင့်အား ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးနိုင်ရန်အတွက် သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကို (သင်နေထိုင်ရာနိုင်ငံ၏ ပြင်ပတွင် နေထိုင်ခြင်းရှိနိုင်သော သို့မဟုတ် ယင်းတို့၏ ရင်းမြစ်များသည် သင်နေထိုင်ရာနိုင်ငံ၏ ပြင်ပတွင် ရှိနေနိုင်သော) ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ထမ်းများနှင့် ဆောင်ရွက်ပေးသူများအား ရယူကြည့်ရှုခွင့်ပေးရန် လိုအပ်ခြင်း ရှိနိုင်ပါသည်။
(င) အထူးသဖြင့် သင်နေထိုင်ရာ နိုင်ငံတွင်ကဲ့သို့ မတူညီသော သို့မဟုတ် အလားတူအဆင့် မရှိသော နိုင်ငံများသို့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အား လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် သိမ်းဆည်းခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဖြစ်လာနိုင်သော အန္တရာယ်များအကြောင်းကို အပြည့်အဝ သိရှိနားလည် လက်ခံပြီး ဤစည်းမျဉ်းများ၏ အပိုဒ်ငယ် ၄.၄ (က) နှင့် ၄.၄ (ခ) နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု ဖော်ပြချက်တို့တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း သင်နေထိုင်ရာ နိုင်ငံမဟုတ်သော နိုင်ငံများတွင် ရှိနေနိုင်သော ကျွန်ုပ်တို့၏မန်ဘာများ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ (Cupid Media က အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် ပါဝင်သော) Dating Group အဖွဲ့ဝင်များနှင့် တတိယအဖွဲ့အစည်းများထံသို့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား လွှဲပေးခြင်းနှင့် သိမ်းဆည်းခြင်းတို့ကို သင်က အတိအလင်း သဘောတူညီခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ လွှဲပြောင်းမှုများအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု ဖော်ပြချက်ပါ စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ Cupid Media မှ စီစဉ်လုပ်ဆောင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု ဖော်ပြချက်တွင် သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းစဉ်များအတိုင်း လိုက်နာခြင်းဖြင့် မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အား ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုမှုကို ကန့်ကွက်ခြင်း သို့မဟုတ် သင့်သဘောတူညီမှုကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခွင့်ရှိပါသည်။
၄.၅ သတ်မှတ်ထားသော မူပိုင်ခွင့်
သင်ပေးထားသော မည်သည့်အရာ သို့မဟုတ် သတင်းအချက်အလက်တွင်မဆို ပါရှိသော မူပိုင်ခွင့်များ အားလုံးကို ဤအသုံးပြုရန် စည်းမျဉ်းများ၏ သတ်မှတ်အတိုင်းအတာအတွင်း အသုံးပြုရန်အတွက် ကုမ္ပဏီထံသို့ သတ်မှတ်ပေးရန် သင်သဘောတူပါသည်။ သင်သည် အခြားသူတစ်ဦး သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းတစ်ခုမှ မူပိုင်ခွင့်ရှိထားသော မည်သည့်အရာ သို့မဟုတ် သတင်းအချက်အလက်ကိုမျှ တင်ခြင်း၊၊ ပေးပို့ခြင်း သို့မဟုတ် တနည်းနည်းဖြင့် ရရှိစေခြင်းကို မပြုလုပ်ရပါ။ ပေးထားသော အရာများနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ အားလုံးသည် သင့်ကိုယ်ပိုင်များသာဖြစ်ကြောင်း၊ အခြားမည်သည့် တတိယ အဖွဲ့အစည်းထံကမျှ မဟုတ်ကြောင်းကို သင်က အာမခံပါသည်။
၄.၆ တရားဝင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှု
သင်ဝဘ်ဆိုက်အား ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုအား အသုံးပြုခြင်းတို့သည် ဥပဒေနှင့်ဆန့်ကျင်ခြင်း သို့မဟုတ် သင့်အတွက် သက်ရောက်သော ဥပဒေများက တားမြစ်ထားခြင်း မရှိကြောင်းကို သေချာစေရပါမည်။ သင့်လုပ်ဆောင်မှုများသည် တည်ဆဲဥပဒေများ အားလုံးအရ တရားဝင်ဖြစ်စေရန်မှာ အလုံးစုံအားဖြင့် သင့်တာဝန်သာ ဖြစ်ပါသည်။
၄.၇ ဗိုင်းရပ်များနှင့် ထိတွေ့ခြင်း
ဝဘ်ဆိုက်အား သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန်အတွက် အသုံးပြုသော လုပ်ငန်းစဉ်တွင် သင့်ကိုယ်ပိုင် ကွန်ပျူတာစနစ်ကို ထိခိုက်ခြင်းရှိနိုင်သော ဗိုင်းရပ်များ၊ မရိုးသားသော ကွန်ပျူတာကုဒ် သို့မဟုတ် အခြားပုံစံဖြင့် နှောင့်ယှက်မှုများ အန္တရာယ်ကို မကြုံတွေ့စေရန် ကိုယ်တိုင်ဂရုပြုသည့် နည်းလမ်းများကို ပြုလုပ်ရပါမည်။ သံသယကို ရှောင်ကြဉ်ရန်အတွက် ဝန်ဆောင်မှု၊ ဝဘ်ဆိုက် သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်ထားသော မည်သည့်ဝဘ်ဆိုက်မဆိုအား အသုံးပြုခြင်းနှင့် ဆက်စပ်၍ သင့်ကိုယ်ပိုင် ကွန်ပျူတာစနစ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော မည်သည့်အနှောင့်အယှက် သို့မဟုတ် ထိခိုက်မှုအတွက်မဆို ကျွန်ုပ်တို့ တာဝန်မယူပါ။
၄.၈ ပရိုဖိုင်တွင် ပါဝင်သည့်အရာ
(က) သင့်ပရိုဖိုင်၊ မက်ဆေ့ဂျ်များ၊ ဗွီဒီယိုနှင့် အသံဖမ်းယူခြင်းများအပြင် ဝန်ဆောင်မှုသို့ သင်တင်သော သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုအား အသုံးပြုသော အခြားမန်ဘာများထံသို့ သင်ပေးပို့သော အခြားအရာများတွင် ပါဝင်သောအရာများအတွက် သင့်တွင်သာ တာဝန်ရှိပါသည်။
(ခ) အောက်ပါတို့ပါဝင်သော မည်သည့်အရာကိုမျှ တင်ခြင်း သို့မဟုတ် သင့်ပရိုဖိုင်တွင် ဖော်ပြခြင်း သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြခြင်းကို မပြုလုပ်ရန် သင်သဘောတူပါသည် -
(၁) စော်ကားသော၊ ညစ်ညမ်းသော၊ ဘာသာရေးကို မလေးစားသော၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကို ဦးတည်သော၊ ခြိမ်းခြောက်သော၊ အနှောင့်အယှက်ပေးသော၊ လူမျိုးရေး ခွဲခြားတိုက်ခိုက်သော၊ မမှန်ကန်သော သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်အရ မသင့်လျော်ဟု ဆုံးဖြတ်သော သို့မဟုတ်
(၂) သင်ကိုယ်တိုင်မဟုတ်သော အခြားသူတဦးဦးကို ပုံဆွဲပြထားခြင်းများ၊ ရှင်းပြထားခြင်းများ၊ မည်သူဖြစ်ကြောင်း သိရှိနိုင်စေသည်များ သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍ ရည်ညွှန်းပြောဆိုမှုများ။
၄.၉ မန်ဘာများနှင့် ပြန်လှန်ဆက်ဆံခြင်း
ဝန်ဆောင်မှုအား အသုံးပြုသော အခြားမန်ဘာများနှင့် ပြန်လှန်ဆက်ဆံခြင်းအတွက် သင့်တွင်သာ တာဝန်ရှိပါသည်။
၄.၁၀ မကောင်းမှုကို တားဆီးသော ပဋိညာဉ်များ
အောက်ပါတို့ကို သင်က အခိုင်အမာပြောဆိုကာ အာမခံပြီး သဘောတူပါသည် -
(က) ဝန်ဆောင်မှုမှတဆင့် သင်ရရှိသော မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်မဆိုကို သင့်အားပေးသောသူထံမှ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ မည်သူ့ကိုမျှ ဖွင့်ဟခြင်း မပြုရပါ။
(ခ) ယင်းတို့သာဟု သတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိသော်လည်း မည်သည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် လူမျိုးရေးဆိုင်ရာ တိုက်ခိုက်မှုကိုမဆို ပြုလုပ်ခြင်း၊ မည်သည့် စော်ကားသော၊ ခြိမ်းခြောက်သော၊ ရိုင်းပျသော၊ ညစ်ညမ်းသော၊ နှောင့်ယှက်သော၊ အထင်လွဲမှားစေသော၊ ထိခိုက်နစ်နာစေသော၊ အသရေပျက်စေသော သို့မဟုတ် ကန့်ကွယ်နိုင်ဖွယ်ရာဖြစ်သော တရားမဝင်သော သို့မဟုတ် ဥပဒေနှင့်မညီသော မည်သည့်အရာ အမျိုးအစားမဆို ပါဝင်သော မည်သည့်ပုံစံဖြင့် နှောင့်ယှက်မှု သို့မဟုတ် တိုက်ခိုက်သော အပြုအမူကိုမဆို သို့တည်းမဟုတ် (ယင်းတို့သာဟု သတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိသော်လည်း ဉာဏပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်ခွင့်များနှင့် ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု အခွင့်အရေးများ အပါအဝင်) အခြားအဖွဲ့အစည်း တခုခု၏ အခွင့်အရေးများကို ထိပါးသော သို့မဟုတ် ချိုးဖောက်သော မည်သည့်အရာကိုမဆို ပြုလုပ်ရန်အတွက် ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးမပြုရပါ။
(ဂ) အုပ်စုလိုက် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်မှုကို ပြုလုပ်ရန် သို့တည်းမဟုတ် အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်သော တွေ့ဆုံမှုများ သို့မဟုတ် ကိစ္စရပ်များအတွက် ရည်ရွယ်၍ ဆက်သွယ်မှုကို ဖြားယောင်းရယူရန် သို့တည်းမဟုတ် ပြည့်တန်ဆာကိစ္စ သို့မဟုတ် သင်နေထိုင်ရာနိုင်ငံတွင် တရားမဝင်ခြင်း ရှိနိုင်သော အခြားမည်သည့် လုပ်ဆောင်မှုများကိုမဆို မြှူဆွယ်ရန် သို့မဟုတ် ပြုလုပ်ရန်အတွက် ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးမပြုရပါ။
(ဃ) မည်သူနှင့်မဆို တူအောင်အယောင်ဆောင်ခြင်း သို့တည်းမဟုတ် သင့်ပရိုဖိုင်တွင် ပါဝင်သော သင့်အသက် သို့မဟုတ် အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေ သို့မဟုတ် တည်နေရာ သတင်းအချက်အလက်ကို အမှားဖော်ပြခြင်း သို့မဟုတ် တနည်းနည်းဖြင့် နားလည်မှုလွဲစေခြင်းကို မပြုလုပ်ရပါ။
(င) အီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အခြားနည်းများဖြင့်ဖြစ်စေ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုသော အခြားအသုံးပြုသူများ၏ အီးမေးလ်လိပ်စာများ သို့မဟုတ် အခြားဆက်သွယ်ရန် သတင်းအချက်အလက်များကို လိုက်လံရယူခြင်း သို့မဟုတ် စုဆောင်းခြင်း သို့တည်းမဟုတ် "spam"၊ ကွင်းဆက်စာများ၊ junk မေးလ်တို့ကို ပေးပို့ရန်အတွက် ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်း သို့တည်းမဟုတ် မည်သည့် တောင်းဆိုထားခြင်းမရှိသော အီးမေးလ်အများအပြား ဖြန့်ဝေခြင်းတို့ကိုမဆို မပြုလုပ်ရပါ။
(စ) ခွင့်ပြုမထားသော မည်သည့်စီးပွားရေး ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်မဆို ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်ကို အသုံးမပြုရပါ။
(ဆ) ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်မှ မည်သည့်မန်ဘာ သို့မဟုတ် အခြားအသုံးပြုသူထံမှ မည်သည့်ငွေကြေး၊ ဘဏ်အကောင့် သို့မဟုတ် ခရက်ဒစ်ကဒ် အသေးစိတ်အချက်များ သို့မဟုတ် လျှို့ဝှက်ထားရှိသော ငွေကြေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကိုမဆို ဖြားယောင်းရယူခြင်း သို့မဟုတ် ဖြားယောင်းရယူရန် ကြိုးစားခြင်းတို့ကို မပြုလုပ်ရပါ။
(ဇ) ဝဘ်ဆိုက်မှတဆင့် ပြောဆိုဆက်ဆံခဲ့သော သို့မဟုတ် တွေ့ဆုံခဲ့သော မည်သူကိုမျှ ငွေကြေးပေးပို့ခြင်း သို့မဟုတ် ငွေကြေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်ကိုပေးခြင်းတို့ကို မပြုလုပ်ရပါ။ ယင်းသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းကြောင့် သင့်ထံတွင် (ငွေကြေးဆိုင်ရာဖြစ်စေ၊ အခြားတခုခုဖြစ်စေ) မည်သည့်ဆုံးရှုံးမှုမဆို ဖြစ်ပေါ်ပါက ကုမ္ပဏီတွင် တာဝန်ရှိမည် မဟုတ်ပါ။ ဖောက်သည်ပံ့ပိုးမှုအား ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ မန်ဘာ၏ ပရိုဖိုင်ပေါ်ရှိ "အနိုင်ကျင့်မှုကို တိုင်ကြားမည်" လုပ်ဆောင်ချက်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ငွေကြေးဖြားယောင်းရန် သို့မဟုတ် ငွေကြေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်ကို ရယူရန် ကြိုးစားသော မည်သူကိုမဆို တိုင်ကြားရန် သင်သဘောတူပါသည်။
(ဈ) သင်သည် အခြားသော မန်ဘာများထံမှ စကားဝှက်များကို ဖြားယောင်းရယူခြင်း သို့မဟုတ် ဖြားယောင်းရယူရန် ကြိုးစားခြင်းတို့ကို မပြုလုပ်ရပါ။
(ည) သင်သည် မည်သည့်ငွေကြေးရရှိရန် ဖြားယောင်းမှုများ၊ ကြော်ငြာခြင်း သို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို ရယူရန်သွေးဆောင်မှုများ ပါဝင်သောအရာကိုမဆို ဖြန့်ချိခြင်း၊ အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်း သို့မဟုတ် တနည်းနည်းဖြင့် ဖော်ပြခြင်းကို ပြုလုပ်ရန်အတွက် ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးမပြုရပါ။
(ဋ) သင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုများကို ရပ်တန့်ရန် ရှင်းလင်းစွာပြောထားသော တစုံတဦးအား ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန် ကြိုးပမ်းမှုကို ဆက်လုပ်ခြင်းဖြင့် အခြားသူများ နှောင့်ယှက်ခြင်းကို မပြုလုပ်ရပါ။
(ဌ) ကွန်ပျူတာ ဆော့ဖ်ဝဲ သို့မဟုတ် ဟာ့ဒ်ဝဲ၏ လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကို အကန့်အသတ်ဖြစ်စေရန် သို့မဟုတ် ဖျက်ဆီးရန် ဒီဇိုင်းဆွဲထားသော ဗိုင်းရပ်စ်များ သို့မဟုတ် အခြားကွန်ပျူတာကုဒ်များ၊ ဖိုင်များ သို့မဟုတ် ပရိုဂရမ်များ ပါဝင်သော အရာများကို တင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပေးပို့ခြင်းကို မပြုလုပ်ရပါ။
(ဍ) ကန့်သတ်ထားခြင်း မရှိသော်လည်း အီးမေးလ်လိပ်စာများ၊ ဖုန်းနံပါတ်များ၊ စာပို့ရန်လိပ်စာများ၊ instant messenger အိုင်ဒီများ၊ Facebook အသုံးပြုသူအမည်များ၊ URL များ သို့မဟုတ် အမည်အပြည့်အစုံတို့ အပါအဝင် မည်သည့်ဆက်သွယ်ရန် သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆို အများမြင်နိုင်စေရန် သင်တင်ထားသော သတင်းအချက်အလက်မှတဆင့် မည်သည့်ပုံစံဖြင့်မဆို တင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပေးပို့ခြင်း မပြုလုပ်ရပါ။
(ဎ) ဝန်ဆောင်မှုတွင် အကောင့်ဝင်ရန်အတွက် သင်သည် လူသားမဟုတ်သော သို့မဟုတ် အလိုအလျောက် ဆောင်ရွက်သော bot များကို အသုံးမပြုရပါ။
(ဏ) ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု ဝန်ထမ်းများအား တယ်လီဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အခြားမည်သည့် နည်းလမ်းမဆိုဖြင့်ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်ပြောဆိုရာတွင် သင်သည် စော်ကားခြင်း၊ ညစ်ညမ်းခြင်း၊ ဘာသာရေးကို မလေးစားခြင်း၊ တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကို ဦးတည်ခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ နှောင့်ယှက်ခြင်း သို့မဟုတ် လူမျိုးရေးအရ တိုက်ခိုက်ခြင်း ("တိုက်ခိုက်စော်ကားသော အပြုအမူ") ကို မပြုလုပ်ရပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ သင်သည် တိုက်ခိုက်စော်ကားသော အပြုအမူကို ပြုလုပ်ခြင်းရှိပါက သင့်မန်ဘာဝင်ခြင်းကို ချက်ချင်းအဆုံးသတ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင် အခွင့်အရေးရှိကြောင်း၊ သင့်ထံမှ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိထားသော မည်သည့် ပုံမှန်ရယူခ ပေးချေမှုများအတွက်မဆို ငွေပြန်အမ်းမှုကို သင်ရရှိမည်မဟုတ်ကြောင်းကို သင်သဘောတူပါသည်။
(တ) သင်သည် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်များမှ မန်ဘာများအားလုံးသည် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီသည် မည်သည့်မန်ဘာကမဆို အသက်မပြည့်သေးသော မည်သူမဆိုအား မည်သည့်ပုံစံဖြင့်မဆို ဆိုက်ဘာလိင်ကိစ္စ (cybersex)၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်း သို့မဟုတ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ရန် မည်သည့်ပုံစံဖြင့် ကြိုးပမ်းမှုကိုမဆို လုံးဝသည်းခံမည် မဟုတ်ပါ။ အသက်မပြည့်သေးသူတစ်ဦးအား ဥပဒေနှင့်မညီသော သို့မဟုတ် မသင့်လျော်သော မည်သည့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုများကိုမဆို ပြုလုပ်ကြောင်း အသိပေးခြင်း ခံရပါက အသေးစိတ်အချက်များကို သင့်လျော်ရာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အေဂျင်စီသို့ ကျွန်ုပ်တို့ သတင်းပို့ခြင်း ရှိနိုင်ပါသည်။
၄.၁၁ မူပိုင်ခွင့် ချိုးဖောက်မှုကို အသိပေးခြင်း
(က) ကုမ္ပဏီသည် အခြားသူများ၏ ဉာဏပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်များကို လေးစားပါသည်။ ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် ဖော်ပြထားသော အရာသည် သင်ပိုင်ဆိုင်သော သို့မဟုတ် တတိယ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှ ပိုင်ဆိုင်သော အရာဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းအပြင် အဆိုပါအရာကို သင့်မူပိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် အခြား ဉာဏပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် တတိယ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ပိုင်ဆိုင်သော ဉာဏပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို ချိုးဖောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ချိုးဖောက်ပုံရသော ပုံစံဖြင့် ဖော်ပြထားကြောင်း သံသယရှိပါက အောက်ပါသတင်းအချက်အလက်ကို ကုမ္ပဏီသို့ပေးခြင်းဖြင့် အသိပေးမှုတစ်ခုကို သင်ပေးပို့နိုင်ပါသည် -
(၁) လိပ်စာ၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာတို့ အပါအဝင် - သင့်အားဆက်သွယ်ရန် အသေးစိတ်အချက်များ
(၂) မူပိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် အခြားဉာဏပစ္စည်း အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ၏ကိုယ်စား ဆောင်ရွက်ရန် ခွင့်ပြုချက်ရထားသူ၏ အီလက်ထရောနစ် သို့မဟုတ် လက်ဖြင့်ရေးထိုးသော လက်မှတ်
(၃) ချိုးဖောက်ခံရသော သို့မဟုတ် ချိုးဖောက်ခံရသည်ဟု သံသယရှိသော အရာ သို့မဟုတ် အခြား ဉာဏပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်မှုအကြောင်း ရှင်းလင်းချက်တစ်ခု
(၄) ချိုးဖောက်ခံရသည်ဟု သံသယရှိသောအရာ တည်ရှိသော ဝဘ်ဆိုက်အမည်
(၅) ချိုးဖောက်ခံရသည်ဟု သံသယရှိသောအရာသည် ဤဝဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိ မည်သည့်နေရာတွင်ရှိကြောင်း ဖော်ပြချက်တစ်ခု
(၆) အောက်ပါတို့ကို ဖော်ပြသော သင့်ထံမှ ရှင်းလင်းချက်တစ်ခု -
(က) အငြင်းပွားသော အသုံးပြုမှုသည် မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်၊ အေးဂျင့် သို့မဟုတ် ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိဟု သင်သဘောရိုးဖြင့် ယုံကြည်ကြောင်း အကျဉ်းရုံး ဖော်ပြခြင်း
(ခ) မုသားသက်သေခံခြင်းအတွက် ပြစ်ဒဏ်ကို သိရှိကာ သင့်အသိပေးချက်ပါ သတင်းအချက်အလက်သည် တိကျပြီး သဘောရိုးဖြင့် ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ သင်သည် မူပိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် ဉာဏပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူဖြစ်ကြောင်း သို့တည်းမဟုတ် မူပိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် ဉာဏပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ၏ကိုယ်စား ဆောင်ရွက်ရန် ခွင့်ပြုထားခြင်းခံရသူဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခြင်း။
အသိပေးချက်များအား အောက်ပါလိပ်စာသို့ ပေးပို့နိုင်ပါသည် -
အီးမေးလ် - copyright@Muslima.com
၄.၁၂ ပုံများကို အသုံးပြုခြင်း
အပိုဒ်ငယ် ၄.၅ တွင် ဖော်ပြထားချက်များအပြင် မည်သည့် ဓာတ်ပုံများ၊ ပစ္စည်း၊ သတင်းအချက်အလက် သို့မဟုတ် ပါဝင်သည့်အရာကို ကုမ္ပဏီသို့ ပေးခြင်းဖြင့် ကုမ္ပဏီသည် အောက်ပါတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း သင်သိရှိနားလည်ကာ သဘောတူခြင်း ဖြစ်ပါသည် -
(က) ပစ္စည်း၊ သတင်းအချက်အလက် သို့မဟုတ် ပါဝင်သည့်အရာကို ထပ်မံပွားခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ ကူးယူခြင်း၊ လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ဖော်ပြခြင်း၊ ဖြန့်ချိခြင်းနှင့် အကျိုးစီးပွားအတွက် အသုံးချခြင်း
(ခ) ယင်းပစ္စည်း၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ပါဝင်သည့်အရာတို့၏ ဆင့်ပွားလုပ်ဆောင်မှုများကို ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားလုပ်ဆောင်မှုများနှင့် အခြားမီဒီယာတို့ဖြင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်
(ဂ) အထက်ပါ အပိုဒ်ငယ် ၄.၁၂ (က) နှင့် ၄.၁၂ (ခ) တို့တွင် ကုမ္ပဏီအား အပ်နှင်းထားသော တူညီသည့် အခွင့်အရေးများဖြင့် အခြားအရာများကို လိုင်စင်ပြုခြင်း။ ယင်းအပြင် သင်သည် ကန့်သတ်ထားခြင်း မရှိသော်လည်း မည်သည့် အရောင်းမြှင့်တင်ရေး သို့မဟုတ် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဆို အပါအဝင် အဆိုပါ အသုံးပြုမှုများ အားလုံးကို သဘောတူညီပါသည်။ ဤအပိုဒ်ငယ်တွင် ရည်ညွှန်းထားသော သဘောတူညီချက်ကို ပေးရန်အတွက် သင့်တွင်လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိကြောင်းကိုလည်း သင်က အာမခံပါသည်။
၄.၁၃ အိမ်ထောင်ဖက်ရှာဖွေနေသော သတို့သမီး လက်ထပ်မှုများ
ဤဝဘ်ဆိုက်သည် ယင်း၏အသုံးပြုသူများအား "အိမ်ထောင်ဖက်ရှာဖွေနေသော သတို့သမီး" လက်ထပ်ရန် တွဲဖက်ပေးခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများကို မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို ကူညီပေးခြင်း၊ ဆွယ်ပေးခြင်း၊ အရောင်းမြှင့်တင်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ပြုလုပ်ပေးခြင်း မပြုသလို ယင်းသို့ ဆောင်ရွက်ပေးသည်ဟုလည်း မမှတ်ယူရပါ။ သင်နေထိုင်သော တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်နယ်မြေတွင် လက်ထပ်ရန် တွဲဖက်ပေးသော ဝန်ဆောင်မှုများ ကြော်ငြာခြင်း သို့မဟုတ် လူများအား လက်ထပ်မှုပြုလုပ်ရန် ဆွယ်ပေးခြင်းတို့ကို တားမြစ်မှုရှိနိုင်ကြောင်း သင်သိရှိနားလည်ပါသည်။
သင်သည် ဖိလစ်ပိုင်၊ ဘီလားရပ်စ် သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားများအား လက်ထပ်ရန် တွဲဖက်ပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးခြင်းကို တားမြစ်ထားသော မည်သည့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် နယ်မြေတွင်မဆို နေထိုင်ပါက သင်သည် ယခုမှစ၍ လက်ထပ်ရန် တွဲဖက်ပေးခြင်းကို တားမြစ်ထားသော မည်သည့်ဥပဒေပြဌာန်းချက်ကိုမဆို ချိုးဖောက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်အား အသုံးပြုမည်မဟုတ်ကြောင်း အာမခံပြီး အခိုင်အမာပြောဆိုကာ ပဋိညာဉ်ပြုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယခုမှစ၍ လက်ထပ်ရန် တွဲဖက်ပေးခြင်းအား မည်သည့်တားမြစ်မှုကိုမဆို သင်မချိုးဖောက်ကြောင်း သေချာစေရန်မှာ သင့်တာဝန်သာလျှင်ဖြစ်ကြောင်း သင်သိရှိနားလည်ကာ သဘောတူညီပြီး ထပ်မံကာ ယခုမှစ၍ လက်ထပ်ရန် တွဲဖက်ပေးခြင်းအား တားမြစ်ထားသော မည်သည့်ဥပဒေ ပြဌာန်းချက်ကိုမဆို သင့်ချိုးဖောက်မှုအတွက် အပိုဒ်ငယ် ၁၇ တွင် ဖော်ပြထားသော တာဝန်ရှိမှုမှ ကင်းလွတ်စေခြင်းကို သင်သိရှိနားလည်ကာ သဘောတူညီခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၅.၁ သတင်းအချက်အလက် စောင့်ကြည့်ခြင်း
ပရိုဖိုင်များ၊ မက်ဆေ့ဂျ်များ၊ စကားပြောဆိုမှု၊ instant message များ၊ ဗွီဒီယိုများနှင့် အသံဖမ်းယူမှုများ အားလုံးသည် ဤအသုံးပြုရန် စည်းမျဉ်းများပါ လိုအပ်ချက်များကို လိုက်နာကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့တွင် စောင့်ကြည့်ပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖောက်သည်များအား အမြင့်မားဆုံး ဝန်ဆောင်မှုအဆင့်အတန်းနှင့် ဘေးအကင်းဆုံး အွန်လိုင်းပတ်ဝန်းကျင်တို့ကို ပေးနေကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖောက်သည်များအတွက် အွန်လိုင်းဘေးကင်းရေး လုပ်ဆောင်မှုများကို ပြုလုပ်ပေးရန် တစ်ခုနှင့်အထက်ဖြစ်သော တတိယအဖွဲ့အစည်းများအား လုပ်ဆောင်စေပါသည်။ ဤလုံခြုံမှုကို ပေးရန်အတွက် အချို့သော ကိုယ်ရေးမဟုတ်သည့် အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်များသို့ သင်ချိတ်ဆက်သော ကွန်ပျူတာ သို့မဟုတ် အခြားကိရိယာထံမှ ရယူရန် လိုအပ်ပါသည်။ သင့်အတွက် ဘေးကင်းလုံခြုံသော အွန်လိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ကို ပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခုတည်းအတွက် အသုံးပြုသည့် အချို့သော ကိုယ်ရေးမဟုတ်သည့် အချက်အလက်များကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ တတိယ အဖွဲ့အစည်း လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ပေးသူများမှ တဆင့်ဖြစ်စေ ကျွန်ုပ်တို့ရယူခြင်းကို သင်က အတိအလင်း သိရှိနားလည်ကာ သဘောတူညီခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မည်သည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကိုမျှ မရယူသည့်တိုင် လုံခြုံရေး ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ခန့်အပ်ထားသော မည်သည့် တတိယအဖွဲ့အစည်းမဆိုသည် အမြင့်မားဆုံး အချက်အလက် ကာကွယ်ရေးနှင့် ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု စံနှုန်းများကို ဂရုပြုစေရန် ကျွန်ုပ်တို့ သေချာလုပ်ဆောင်ပါသည်။
၅.၂ သတင်းအချက်အလက်ကို ပြင်ဆင်ခြင်း
ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုသော မန်ဘာများ၏ မက်ဆေ့ဂျ်များ သို့မဟုတ် တင်သော သို့မဟုတ် ပေးပို့သော အခြားအရာတိုင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း မပြုသလို ယင်းသို့ ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းလည်း မရှိဘဲ အဆိုပါ မက်ဆေ့ဂျ်များ သို့မဟုတ် အရာများတွင် ပါဝင်သော မည်သည်အတွက်မဆို တာဝန်မယူနိုင်သည့်တိုင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ဤအသုံးပြုရန် စည်းမျဉ်းများကို ချိုးဖောက်သည်ဟု ယူဆသော သို့မဟုတ် တနည်းနည်းဖြင့် လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာ မဟုတ်သော မက်ဆေ့ဂျ်များ သို့မဟုတ် (ပရိုဖိုင်များ၊ မက်ဆေ့ဂျ်များ၊ ဗွီဒီယိုများနှင့် အသံဖမ်းယူခြင်းများ အပါအဝင်) အရာများကို ဖျက်ရန်၊ နေရာရွှေ့ရန် သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင် မဖြစ်မနေ တာဝန်မရှိသော်လည်း လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။
၅.၃ သတင်းအချက်အလက် လုံခြုံရေး
ကံမကောင်းစွာပင် အင်တာနက်ပေါ်တွင် မည်သည့်အချက်အလက် ပေးပို့မှုကိုမျှ အလုံးစုံလုံခြုံစေရန် အာမ မခံနိုင်ပါ။ အဆိုပါ သတင်းအချက်အလက်ကို ကာကွယ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ အစွမ်းကုန်လုပ်ဆောင်သည့်တိုင် ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ သင်ပေးပို့သော သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု ဖော်ပြချက်နှင့််အညီ အခြားခွင့်ပြုထားသော တတိယအဖွဲ့အစည်းများထံသို့ ကျွန်ုပ်တို့က ပေးပို့သော မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်၏ လုံခြုံရေးကိုမျှ အာမ မခံသလို စိတ်ချနိုင်စေခြင်းလည်း မရှိပါ။ သို့ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ သင်ပေးပို့သော မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်မဆိုအတွက် သင့်ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ချက်အရသာဖြစ်ကြောင်း သင်အတိအလင်း သိရှိနားလည်ပါသည်။
ထပ်မံ၍ သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကို ခွင့်ပြုထားသော တတိယအဖွဲ့အစည်းများထံသို့ သင်နေထိုင်ရာ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် နယ်မြေအတွင်းတွင်ရော၊ ပြင်ပတွင်ပါ ကျွန်ုပ်တို့က ပေးပို့ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဖြစ်လာနိုင်သော အန္တရာယ်များ၊ အထူးသဖြင့် သင်နေထိုင်ရာ နိုင်ငံတွင်ကဲ့သို့ တူညီသော သို့မဟုတ် အလားတူသော ကာကွယ်ရေး အဆင့်မရှိသည့် အခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့် နယ်မြေများသို့ ပေးပို့ခြင်းအတွက် ဖြစ်လာနိုင်သော အန္တရာယ်များကို အပြည့်အစုံ သိရှိနားလည်ပြီးဖြစ်ကာ သင်က အတိအလင်း သဘောတူညီပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု ဖော်ပြချက်တွင် သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အညီ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို သင့်သဘောတူညီချက်ကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရန် သို့မဟုတ် သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အား ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုမှုကို ကန့်ကွက်ရန် သင့်တွင် ပြုလုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။
အထက်ပါအတိုင်း ဆိုခဲ့စေကာမူ သင့်ပေးပို့မှုကို ကျွန်ုပ်တို့ လက်ခံရရှိသည်နှင့် အဆိုပါ သတင်းအချက်အလက်၏ လုံခြုံမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် သင့်လျော်သော အဆင့်များကို ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ဆောင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
၆။ တားမြစ်ထားသော အသုံးပြုမှု
ကျွန်ုပ်တို့က တနည်းနည်းဖြင့် စာဖြင့်ရေးသား သဘောတူညီထားသည်မှလွဲ၍ သင့်အား ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အသုံးပြုမှုအတွက်သာ ဝဘ်ဆိုက်ကို ဝင်ရောက်အသုံးပြုခွင့် ပေးထားပါသည်။ လုပ်ငန်းများ၊ အဖွဲ့များ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကုမ္ပဏီများအား မန်ဘာအဖြစ် စာရင်းသွင်းခြင်းကို တားမြစ်ထားပါသည်။ ပရင့်ထုတ်ခြင်းကို အတိအလင်း တားမြစ်ထားခြင်းမရှိလျှင် ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် ပါဝင်သော မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆို သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွက် အသုံးပြုရန် မိတ္တူအဖြစ် ပရင့်ထုတ်ခွင့် ရှိပါသည်။
တိုက်ရိုက်ဈေးကွက်တင်ခြင်း ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ကုမ္ပဏီက ရယူထားသော သင့်အကြောင်း ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကို ကုမ္ပဏီက အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ဖွင့်ဟခြင်း ရှိနိုင်သည်ကို သင်က အတိအလင်း သဘောတူညီကာ ခွင့်ပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု ဖော်ပြချက်တွင် သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အညီ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို သင့်သဘောတူညီမှုကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် သင့်ကိုယ်ရေး အချက်အလက်အား ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုမှုကို ကန့်ကွက်ခြင်းအား သင့်တွင် ပြုလုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။
ဝန်ဆောင်မှုတွင် အပြောင်းအလဲရှိခြင်းများ သို့မဟုတ် ထပ်တိုးခြင်းများအပြင် ကုမ္ပဏီနှင့် ယင်း၏ စီးပွားဖက် လုပ်ငန်းများ၏ မည်သည့်ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများမဆိုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သင့်ထံသို့ အီလက်ထရောနစ်မေးလ်ကို ပေးပို့ရန် ကုမ္ပဏီတွင် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။
၉.၁ အလုံးစုံ တာဝန်ရှိမှု
(ကြော်ငြာသူများ၏ ကိုယ်ပိုင်ဝဘ်ဆိုက်များသို့ ရောက်ရှိစေမည့် ဟိုင်ပါလင့်ခ် (hyperlink) များ အပါအဝင်) ဝဘ်ဆိုက်တွင် မြင်ရသော ကြော်ငြာများ (ရှိလျှင်) တွင် ပါဝင်သော အကြောင်းအရာများအတွက် ကြော်ငြာသူများထံတွင်သာ အလုံးစုံ တာဝန်ရှိပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့ ကြော်ငြာများအား ထားပေးခြင်းသည် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ကြော်ငြာသူများ၏ ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို ညွှန်းဆိုခြင်း သို့မဟုတ် ထောက်ခံချက်ပေးခြင်း မဟုတ်ပါ။ ယင်းတို့၏ ကြော်ငြာများနှင့် ဆက်စပ်၍ ပြုလုပ်ထားသော မည်သည့်ဖော်ပြချက်အတွက်မဆို ကြော်ငြာသူတစ်ဦးချင်းစီတွင်သာ အလုံးစုံ တာဝန်ရှိပါသည်။
၁၀။ ဉာဏပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်မှု
ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဝဘ်ဆိုက်၏ အခွင့်အရေးများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် အကျိုးအမြတ်များအပြင် သက်ဆိုင်ရာ ဉာဏပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်ခွင့်များအားလုံးသည် ကုမ္ပဏီ၏ လက်ဝယ်တွင်ရှိပြီး ရရှိထားသည်ဟု အတိအလင်း ဖော်ပြထားခြင်း မရှိသော ပိုင်ဆိုင်ခွင့်များအားလုံးကို ရရှိထားပါသည်။
(စာသား၊ ရုပ်ပုံများ၊ ဂရပ်ဖစ်များ၊ လိုဂိုများ၊ အိုင်ကွန်များ၊ အသံဖမ်းယူမှုများနှင့် ဆော့ဖ်ဝဲတို့ အပါအဝင်) ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဝဘ်ဆိုက်မှ မူပိုင်ခွင့်ကို ကုမ္ပဏီက ပိုင်ဆိုင် သို့မဟုတ် လိုင်စင်လုပ်ထားပါသည်။ Copyright Act 1968 (Cth) နှင့် သင်နေထိုင်သည့်နေရာတွင် အကျုံးဝင်သော အလားတူ ဥပဒေပြဌာန်းချက်တို့တွင် ဖော်ပြထားသော အခြေအနေများအရနှင့် ဤအသုံးပြုရန် စည်းမျဉ်းများတွင် အတိအလင်း ခွင့်ပြုထားသည်များမှလွဲ၍ အခြားသော ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် သင်သည် မည်သည့်ပုံစံ၊ မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်မဆို -
(က) ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်၏ မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုမဆို အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲခြင်း၊ ထပ်မံပွားယူခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်း၊ ဖြန့်ချိခြင်း၊ ပရင့်ထုတ်ခြင်း၊ ဖော်ပြခြင်း၊ လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ထုတ်ဝေခြင်း သို့မဟုတ် ဆင့်ပွားလုပ်ဆောင်ချက်များကို ဖန်တီးခြင်း သို့မဟုတ်
(ခ) ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်၏ မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းမှမဆို ရရှိသော မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်၊ ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကိုမဆို စီးပွားရေးအမြတ်ထုတ်ခြင်းတို့ကို
ကျွန်ုပ်တို့၏ စာဖြင့်ရေးသားကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် မရှိဘဲ မပြုရပါ။
အခြားနည်းဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည်များမှလွဲ၍ ™ သို့မဟုတ် ® အမှတ်အသားဖြင့် ပူးတွဲထားသော မည်သည့်အရာ သို့မဟုတ် ကိရိယာမဆိုသည် မှတ်ပုံတင်ထားသော ကုန်အမှတ်တံဆိပ် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ဆောင်မှုများ၊ ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို ရည်ညွှန်းရန်အတွက် ကုမ္ပဏီမှ ပိုင်ဆိုင်သော မည်သည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုမဆို သင်အသုံးပြုပါက ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည် ကုမ္ပဏီနှင့် သက်ဆိုင်ကြောင်း ဖော်ပြချက်တစ်ခုကို ထည့်သွင်းရပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကို -
(က) အလုံးစုံဖြစ်စေ၊ တစိတ်တပိုင်းဖြစ်စေအား သင့်ကိုယ်ပိုင် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအဖြစ်ဖြစ်စေ
(ခ) ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ဆောင်မှုများ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ မဟုတ်သော အရာများနှင့် ပတ်သက်၍ဖြစ်စေ
(ဂ) စိတ်ရှုပ်ထွေးစေခြင်း၊ နားလည်မှုလွဲစေခြင်း သို့မဟုတ် လိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်း ဖြစ်နိုင်သော အပြုအမူဖြင့်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ်
(ဃ) ကျွန်ုပ်တို့ကို သို့မဟုတ် (ကန့်သတ်ထားခြင်း မရှိသော်လည်း ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဝဘ်ဆိုက်တို့ အပါအဝင်) ကျွန်ုပ်တို့၏ သတင်းအချက်အလက်၊ ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို မတရားချိုးနှိမ်ပြောဆိုသည့် ပုံစံဖြင့်ဖြစ်စေ သင်သုံးစွဲခြင်း မပြုရပါ။
၁၁။ ချိတ်ဆက်ထားသော ဝဘ်ဆိုက်များ
၁၁.၁ အဆင်ပြေလွယ်ကူစေရန်အတွက်သာ ပေးထားသောလင့်ခ်များ
ဝဘ်ဆိုက်တွင် အခြားဝဘ်ဆိုက်များ ("ချိတ်ဆက်ထားသော ဝဘ်ဆိုက်များ") အတွက် လင့်ခ်များ ပါဝင်ခြင်းရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါလင့်ခ်များသည် အဆင်ပြေလွယ်ကူစေရန်အတွက်သာ ပေးထားခြင်းဖြစ်ပြီး လက်ရှိအတိုင်းမဟုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းထားမှုမရှိခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ချိတ်ဆက်ထားသော ဝဘ်ဆိုက်များနှင့် ဆက်စပ်သော အကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု ဆောင်ရွက်ချက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်မရှိပါ။
ယင်းသို့မဟုတ်ကြောင်း သဘောတူညီရန် တောင်းဆိုထားသော အတိုင်းအတာအထိနှင့် ယင်းမှလွဲ၍ ချိတ်ဆက်ထားသော ဝဘ်ဆိုက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏လင့်ခ်များကို ယင်းချိတ်ဆက်ထားသော ဝဘ်ဆိုက်များ၏ ပိုင်ရှင်များ သို့မဟုတ် ဦးစီးလုပ်ဆောင်သူများအားဖြစ်စေ၊ ချိတ်ဆက်ထားသော ဝဘ်ဆိုက်များတွင် ရည်ညွှန်းထားသော သို့မဟုတ် ပါဝင်သော မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်၊ ဂရပ်ဖစ်များ၊ ပစ္စည်းများ၊ ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကိုဖြစ်စေ ကုမ္ပဏီက ထောက်ခံချက်ပေးခြင်း၊ အတည်ပြုချက်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ညွှန်းဆိုပေးခြင်းအဖြစ် မမှတ်ယူသင့်ပါ။ ချိတ်ဆက်ထားသော ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုကို အသုံးမပြုမီတွင် ယင်း၏ အသုံးပြုရန် စည်းမျဉ်းများနှင့် ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒတို့ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ တိုက်တွန်းပါသည်။
၁၂။ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု ဖော်ပြချက်
ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ရှိသော ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု ဖော်ပြချက် မှ စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရန် ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ဆောင်ပြီး ယင်းကို တည်ဆဲဥပဒေများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် အညီဖြစ်စေရန် အခါအားလျော်စွာ ပြင်ဆင်ခြင်း ရှိနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု ဖော်ပြချက်တွင် သတ်မှတ်ထားသော အပြုအမူနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များအတိုင်း သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အား ကျွန်ုပ်တို့ ရယူခြင်း၊ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းကို သင်က အတိအလင်း သဘောတူညီပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု ဖော်ပြချက်တွင် သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အညီ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို သင့်သဘောတူညီမှုကို ရုပ်သိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အား ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုမှုကို ကန့်ကွက်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား မည်သည့်တတိယ အဖွဲ့အစည်းများ ထံသို့မဆို ရောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် (ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု ဖော်ပြချက်တွင် ထိုစီးပွားရေးရည်ရွယ်ချက်ကို အတိအကျ ရည်ညွှန်းထားသည်မှလွဲ၍) စီးပွားရေး ရည်ရွယ်ချက်တခုခုအတွက် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား တတိယ အဖွဲ့အစည်းများထံသို့ ပေးခြင်းကို မပြုလုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု ဖော်ပြချက်တွင် သတ်မှတ်ထားသော အခြေအနေများအတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ တတိယအဖွဲ့အစည်းများထံသို့နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု ဖော်ပြချက်ကို ထုတ်ပြန်သည့်အချိန်များနှင့် ယင်းတွင်သတ်မှတ်ထားသော ပုံစံအတိုင်း ချိန်းတွေ့ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးသည့် Dating Group ၏ အခြားအဖွဲ့ဝင်များထံသို့ သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ပေးပါသည်။
၁၃။ ဝဘ်ဆိုက် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို ရောင်းချခြင်း
အကယ်၍ ကုမ္ပဏီသည် ဝဘ်ဆိုက်၊ ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် ယင်း၏လုပ်ငန်း (သို့မဟုတ် ယင်းလုပ်ငန်း၏ မည်သည့်အပိုင်းကိုမဆို) ရောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီအား ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းတွင် အပြောင်းအလဲ ပြုလုပ်ခြင်းပြုပါက သင့်အား ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးနိုင်ရန်နှင့် တိုက်ရိုက်ဈေးကွက်တင်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် (ဓာတ်ပုံများနှင့် အများပြည်သူမြင်နိုင်သော သင့်ပရိုဖိုင် အပါအဝင်) ဝဘ်ဆိုက် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများသို့ သင်ပေးပို့ခဲ့သော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်၊ အထူးကဏ္ဍ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်နှင့် အခြားမည်သည့် သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆို ဝယ်ယူသူ သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်မှုကိုပြုလုပ်မည့် လုပ်ငန်းအသစ် သို့မဟုတ် လူပုဂ္ဂိုလ်အသစ်ထံသို့ ဖွင့်ဟခြင်း၊ သတ်မှတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် တနည်းနည်းဖြင့် လွှဲပြောင်းပေးခြင်း ရှိနိုင်သည်ကို သင်က သဘောတူညီကာ အတိအလင်း ခွင့်ပြုချက်ပေးပါသည်။
ဝယ်ယူသူအသစ် သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်မှုကို ပြုလုပ်မည့် လုပ်ငန်းအသစ် သို့မဟုတ် လူပုဂ္ဂိုလ်အသစ်သည် သင်နေထိုင်ရာနိုင်ငံမဟုတ်သော နိုင်ငံတစ်ခုတွင် ရှိနေနိုင်သည်ကို သင်သိရှိနားလည်ကာ အတိအလင်း သဘောတူညီပါသည်။ ယင်းအပြင် သင်နေထိုင်ရာ နိုင်ငံမဟုတ်သော နိုင်ငံများသို့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အား လွှဲပြောင်းပေးခြင်းအတွက် သင်သဘောတူညီမှု ပေးပါသည်။
၁၄။ ငြင်းဆိုချက်များနှင့် တာဝန်ယူမှု အကန့်အသတ်များ
၁၄.၁ Australian Consumer Law အရ သုံးစွဲသူအခွင့်အရေးများ
ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၏ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်နယ်မြေတွင် နေထိုင်သူများအတွက် Australian Consumer Law (ACL) အရ သင့်တွင် အခွင့်အရေးများနှင့် ကုစားမှုများ ရှိပါသည်။
၁၄.၂ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ၊ အိမ်တွင်းသုံး သို့မဟုတ် အိမ်တွင်အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် စားသုံးခြင်းအတွက် ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ် အာမခံချက်များ
သာမန်အားဖြင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ၊ အိမ်တွင်းသုံး သို့မဟုတ် အိမ်တွင်အသုံးပြုခြင်းအတွက် သုံးစွဲသော အမျိုးအစားဖြစ်သည့် ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို ကျွန်ုပ်တို့ပေးသည့် ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၏ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် နယ်မြေတွင် ACL အရပေးထားသော သုံးစွဲသူ အာမခံချက်များအား မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို ကန့်သတ်ထားခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ပယ်ထားခြင်း မရှိပါ။
၁၄.၃ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ၊ အိမ်တွင်းသုံး သို့မဟုတ် အိမ်တွင်အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် သုံးစွဲခြင်းအတွက် မဟုတ်သော ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အာမခံချက်များ
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ၊ အိမ်တွင်းသုံး သို့မဟုတ် အိမ်တွင်အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် သုံးစွဲခြင်းအတွက် မဟုတ်သော်လည်း ကုန်ကျစရိတ် $40,000 ထက်မပိုသော အမျိုးအစားဖြစ်သည့် ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ကျွန်ုပ်တို့ပေးသည့် ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၏ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် နယ်မြေတွင် သုံးစွဲသူ အာမခံချက်များကို အောက်ပါအတိုင်း ကန့်သတ်ထားပါသည် -
(က) ပစ္စည်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ -
(၁) ပစ္စည်းများကို အစားထိုးလဲလှယ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် အလားတူ ပစ္စည်းများကိုပေးခြင်း
(၂) အဆိုပါ ပစ္စည်းများကို ပြုပြင်ပေးခြင်း
(၃) အဆိုပါ ပစ္စည်းများကို အစားထိုးလဲလှယ်ပေးခြင်းများ သို့မဟုတ် အလားတူ ပစ္စည်းများကို ရယူခြင်းအတွက် ငွေပေးချေမှု သို့မဟုတ်
(၄) ပစ္စည်းများကို ပြုပြင်ပေးခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို ငွေပေးခေျမှုနှင့်
(ခ) ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ -
(၁) ဝန်ဆောင်မှုကို ထပ်မံပေးခြင်း သို့မဟုတ်
(၂) ထပ်မံပေးသော ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို ငွေပေးချေမှု။
၁၄.၄ တိကျမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အာမခံချက်များ မရှိပါ
အပိုဒ်ငယ် ၁၄.၂ နှင့် ၁၄.၃ တို့အတွက် (ကုမ္ပဏီမှဖြစ်စေ၊ မည်သည့်မန်ဘာမဆိုမှဖြစ်စေ၊ အခြားမည်သူ သို့မဟုတ် မည်သည့်လုပ်ငန်းမဆိုမှဖြစ်စေ ဖော်ပြသော၊ တင်ထားသော သို့မဟုတ် ဖြန့်ချိသော မည်သည့်မန်ဘာပရိုဖိုင်၊ အကြံဉာဏ်၊ ထင်မြင်ချက်၊ ဖော်ပြချက် သို့မဟုတ် အခြားသတင်းအချက်အလက်တို့မဆို အပါအဝင်) ဝန်ဆောင်မှုမှတဆင့် သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် ပေးထားသော အရာ သို့မဟုတ် သတင်းအချက်အလက်သည် စိတ်ချရကြောင်း၊ တိကျကြောင်း သို့မဟုတ် ပြည့်စုံကြောင်း သို့တည်းမဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်အား သင်ဝင်ရောက်အသုံးပြုခြင်းသည် အပြတ်အတောက်ကင်းကာ အသုံးပြုလိုသည့်အချိန်တိုင်းတွင် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် လုံခြုံခြင်းတို့ ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း မည်သည့်အခိုင်အမာ ပြောဆိုမှု သို့မဟုတ် အာမခံမှုကိုမျှ ကျွန်ုပ်တို့ မပြုလုပ်ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုမှတဆင့် သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်မှ ရရှိသော မည်သည့်သတင်းအချက်အလက် သို့မဟုတ် အရာကိုမဆို ရယူသော သို့မဟုတ် အားကိုးသော မည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုမှမဆို ဖြစ်ပေါ်လာသော မည်သည့်ဆုံးရှုံးမှုမဆိုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်ရှိမည် မဟုတ်ပါ။ ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် တွေ့ရသော မည်သည့်သတင်းအချက်အလက် သို့မဟုတ် အရာကိုမဆို ဆောင်ရွက်ခြင်း သို့မဟုတ် အားကိုးခြင်းမပြုမီတွင် သင်ကိုယ်တိုင် စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများကို ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။ အဆိုပါ မည်သည့်အရာ သို့မဟုတ် သတင်းအချက်အလက်မဆိုအား မည်သို့သော အားကိုးခြင်းကိုမဆို မိမိအတွက် ဖြစ်နိုင်သော အန္တရာယ်များအား ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း သင်သိရှိနားလည်ပါသည်။
၁၄.၅ ရရှိနိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အာမခံချက်များ မရှိပါ
အပိုဒ်ငယ် ၁၄.၂ နှင့် ၁၄.၃ တို့အတွက် ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်သည် အပြတ်အတောက် ကင်းခြင်း သို့မဟုတ် ချို့ယွင်းချက်မရှိခြင်း ဖြစ်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ အာမ မခံပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကို "လက်ရှိအခြေအနေ" အတိုင်း ဖြန့်ချိပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်ကို ရရှိအသုံးပြုနိုင်မှုတွင် နှောင့်နှေးမှုများ၊ ကျန်ရစ်မှုများနှင့် အပြတ်အတောက်ရှိခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားခြင်းရှိပါက ဝန်ဆောင်မှု (နှင့် ဝဘ်ဆိုက်ကို ရရှိအသုံးပြုနိုင်မှု) ကို ကန့်သတ်ထားခြင်း မရှိသော်လည်း ရည်ရွယ်ချက်တခုခုအတွက် ရည်ညွှွှန်းထားသော ဈေးကွက်တင်နိုင်မှုနှင့် ခိုင်မာမှု အာမခံချက်များ အပါအဝင် ဖော်ပြထားသည်ဖြစ်စေ၊ ညွှန်းထားသည်ဖြစ်စေ မည်သည့်အာမခံကိုမျှ မည်သို့သော အမျိုးအစားဖြင့်မဆို ပေးထားခြင်းမရှိကြောင်း သင်သိရှိနားလည်ပါသည်။
၁၄.၆ မပါဝင်သော ရည်ညွှန်းသည့် အာမခံများ
ဥပဒေတွင် ခွင့်ပြုထားသော အတိုင်းအတာအထိနှင့် အပိုဒ်ငယ် ၁၄.၂ နှင့် ၁၄.၃ တို့အရ ဤအသုံးပြုရန် စည်းမျဉ်းများသို့ တနည်းနည်းဖြင့် ရည်ညွှန်းမည်ဖြစ်သော မည်သည့်အခြေအနေ သို့မဟုတ် အာမခံချက်ကိုမဆို ဤနေရာမှစ၍ ထုတ်ပယ်ပါသည်။ ဥပဒေပြဌာန်းချက်တွင် မည်သည့်အခြေအနေ သို့မဟုတ် အာမခံချက် တခုခုကိုမဆို ရည်ညွှန်းထားပြီး ယင်းဥပဒေပြဌာန်းချက်အရ အဆိုပါမည်သည့် အခြေအနေ သို့မဟုတ် အာမခံချက်ကိုမဆို ထုတ်ပယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ခြင်းအား မပြုလုပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အား တားမြစ်ထားခြင်း သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ တာဝန်ယူမှုအောက်တွင် ရှိစေခြင်း ဖြစ်ပါက အဆိုပါ အခြေအနေ သို့မဟုတ် အာမခံချက်ကို ပါဝင်သည်ဟု ယူဆမည်ဖြစ်သော်လည်း အောက်ပါ တစ်ခုနှင့်အထက်ဖြစ်သော ကိစ္စရပ်များတွင် ထိုအခြေအနေ သို့မဟုတ် အာမခံချက်ကို ချိုးဖောက်ခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ တာဝန်ယူမှုတွင် အကန့်အသတ်ရှိမည် ဖြစ်ပါသည် -
(က) အကယ်၍ ချိုးဖောက်မှုသည် ပစ္စည်းများနှင့် သက်ဆိုင်လျှင် -
(၁) ပစ္စည်များကို အစားထိုးလဲလှယ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် အလားတူပစ္စည်းများကိုပေးခြင်း
(ခ) အကယ်၍ ချိုးဖောက်မှုသည် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် သက်ဆိုင်လျှင် -
(၁) ဝန်ဆောင်မှုများကို ထပ်မံပေးခြင်း သို့မဟုတ်
၁၄.၇ ဆုံးရှုံးမှုအတွက် တာဝန်မယူခြင်း
(ပေါ့ဆမှုကြောင့်ဖြစ်သောအရာ အပါအဝင်) ဝန်ဆောင်မှု၊ ဝဘ်ဆိုက် သို့မဟုတ် မည်သည့် ချိတ်ဆက်ထားသော ဝဘ်ဆိုက်များကိုမဆို သင်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ဆက်စပ်၍ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ သင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သော မည်သည့်အကြောင်းရင်းကြောင့်မဆိုဖြစ်သည့် မည်သို့သော ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် ထိခိုက်နစ်နာမှုအတွက်မဆို ကျွန်ုပ်တို့က တာဝန်ယူမည် မဟုတ်သလို ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်တွင် ပါဝင်သော သို့မဟုတ် တဆင့်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုထားသော သတင်းအချက်အလက်ကို သင်အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် အားကိုးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော မည်သည့်ဆုံးရှုံးမှုအတွက်မဆိုကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်ရှိကြောင်း လက်ခံမည် မဟုတ်ပါ။ သံသယကို ရှောင်ရှားရန်နှင့် ရှေ့တွင်ဆိုခဲ့သောအရာ၏ အကြမ်းဖျင်း ဖော်ပြမှုကို ကန့်သတ်ခြင်း မရှိစေရန်အတွက် -
(က) ဤကဲ့သို့သော ထိခိုက်မှုများ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ကုမ္ပဏီအား အကြံပြုထားလျှင်ပင် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်ကို သင်အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်ကို အသုံးပြုရာတွင် မည်သည့်နှောင့်နှေးမှု သို့မဟုတ် အသုံးမပြုနိုင်မှု သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်မှတဆင့် ရရှိထားသော မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် အခြားဝန်ဆောင်မှုများမဆို သို့မဟုတ် ကန်ထရိုက်အရ၊ ပေါ့ဆမှုအရ သို့မဟုတ် အခြားတရားမနစ်နာမှုအရ၊ တင်းကျပ်သော တာဝန်ရှိမှု သို့မဟုတ် တနည်းနည်းဖြင့်ဖြစ်စေ ဝဘ်ဆိုက်ကို အသုံးပြုခြင်းကြောင့် တနည်းနည်းဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော မည်သည့်တိုက်ရိုက်၊ သွယ်ဝိုက်၊ အစမ်းသဘော၊ မတော်တဆ၊ အထူး သို့မဟုတ် အကျိုးဆက်အဖြစ် ထိခိုက်မှုများအတွက်မဆို မည်သည့်တာဝန်ယူမှု သို့မဟုတ် တာဝန်ရှိမှုကိုမျှ လက်မခံပါ။
(ခ) ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်သို့ သင်ပေးပို့သော မည်သည့်သတင်းအချက်အလက် သို့မဟုတ် အရာအတွက်မဆို မည်သည့်တာဝန်ယူမှု သို့မဟုတ် တာဝန်ရှိမှုကိုမျှ လက်မခံသလို ဝန်ဆောင်မှု သို့ ဝဘ်ဆိုက်သို့ သင်ပေးပို့သော မည်သည့်သတင်းအချက်အလက် သို့မဟုတ် အရာကိုမဆိုအား အခြားမန်ဘာများ သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူများက မည်သည့်အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် လွဲမှားစွာ အသုံးပြုခြင်းအတွက်မဆို မည်သည့် တာဝန်ရှိမှုကိုမျှ ကျွန်ုပ်တို့ လက်မခံပါ။
(ဂ) ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ကန့်သတ်ထားခြင်း မရှိသော်လည်း မည်သူကိုမဆို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာကို ဖြစ်စေသော မည်သည့်ပြုလုပ်မှုအတွက်မဆို အပါအဝင် ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုသော မည်သည့်မန်ဘာ သို့မဟုတ် အခြားအသုံးပြုသူ၏ ပြုလုပ်မှုအတွက် မည်သည့် တာဝန်ယူမှု သို့မဟုတ် တာဝန်ရှိမှုကိုမျှ လက်မခံပါ။
၁၅။ အွန်လိုင်းတွင် ချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သီးခြား သတိပေးချက်များ
၁၅.၁ ဖြစ်နိုင်သော အန္တရာယ်များ
ကန့်သတ်ထားခြင်း မရှိသော်လည်း အသက်မပြည့်သေးသောသူ၊ လိမ်ညာရန် ဟန်ဆောင်သူ သို့မဟုတ် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခုအတွက် ဟန်ဆောင်သူမှန်း မသိရှိဘဲ ဆက်ဆံမိခြင်း အပါအဝင် အွန်လိုင်းတွင် ချိန်းတွေ့ခြင်း၌ ဖြစ်လာနိုင်သော အန္တရာယ်များကို သင်သိရှိနားလည်ပါသည်။ အခြားအသုံးပြုသူများနှင့် ပြောဆိုဆက်ဆံရာတွင် သို့မဟုတ် တွေ့ဆုံရာတွင် အထူးသဖြင့် လူကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံရန် ဆုံးဖြတ်ရာတွင် လိုအပ်သော သတိပြုရန် အချက်များအားလုံးကို လိုက်နာရန် သင်သဘောတူပါသည်။ ယင်းအပြင် ဝန်ဆောင်မှုအား အသုံးမပြုမီတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ အွန်လိုင်းတွင် ချိန်းတွေ့ရာ၌ ဘေးကင်းရေး အကြုံပြုချက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် သင်သဘောတူညီပါသည်။
၁၅.၂ မန်ဘာများ၏ မည်သူဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြချက်အတွက် အာမခံခြင်း မရှိပါ
အင်တာနက်ပေါ်တွင် အသုံးပြုသူ အစစ်အမှန် ဖြစ်စေရေးမှာ အလွန်အမင်း ခက်ခဲကြောင်း သင်သိရှိနားလည်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုသော မန်ဘာ သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူ တစ်ဦးစီသည် ယင်းတို့မည်သူဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုထားသည့်အတိုင်း မှန်ကန်ခြင်း ရှိမရှိကို ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် အာမခံခြင်း မပြုနိုင်သလို အာမခံခြင်းလည်း မပြုပါ။ ထို့အပြင် မန်ဘာပရိုဖိုင်များသည် စိတ်ချရကြောင်း၊ တိကျကြောင်းနှင့် ပြည့်စုံကြောင်းကို ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် အာမခံခြင်း မပြုနိုင်သလို အာမခံခြင်းလည်း မပြုပါ။ သို့ဖြစ်၍ သင်သည် ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်ကို အသုံးပြုသော အခြားမန်ဘာများ သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူများနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် ဂရုပြုရမည် ဖြစ်ပါသည်။
၁၆.၁ မန်ဘာများအတွက် သဘောတူညီချက် သက်ရောက်မှုရှိခြင်း
သင်သည် ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုသော မန်ဘာတစ်ဦး သို့မဟုတ် တနည်းနည်းဖြင့် ဝဘ်ဆိုက်ကို အသုံးပြုသူဖြစ်ပါက ဤသဘောတူညီချက်သည် အပြည့်အဝ သက်ရောက်မှုရှိနေမည် ဖြစ်ပါသည်။
၁၆.၂ မန်ဘာဝင်ခြင်းကို သင်ကအဆုံးသတ်ခြင်း
သင်သည် သင့်မန်ဘာဝင်မှုကို မည်သည့်အချိန်၊ မည်သည့် အကြောင်းရင်းအတွက်မဆို အဆုံးသတ်နိုင်ပြီး အဆုံးသတ်ရန်အတွက် သင့်စာဖြင့်ရေးသား အသိပေးမှုကို ကျွန်ုပ်တို့ လက်ခံရရှိသည်နှင့် ချက်ချင်း အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆုံးသတ်ရန် အသိပေးမှုကို ဝဘ်ဆိုက်မှ ကျွန်ုပ်တို့အား ဆက်သွယ်ရန်ကဏ္ဍတွင် ဖော်ပြထားသော လိပ်စာသို့ ပေးပို့ခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဝဘ်ဆိုက်မှ ကျွန်ုပ်တို့အား ဆက်သွယ်ရန်ကဏ္ဍတွင် ဖော်ပြထားသော အီးမေးလ်လိပ်စာသို့ အီးမေးလ်ပေးပို့ခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်မှ မန်ဘာများကဏ္ဍတွင် ဖော်ပြထားသော မန်ဘာဝင်မှုအား ပိတ်သိမ်းမည်လင့်ခ်ကို နှိပ်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ သင့်မန်ဘာဝင်ခြင်းအား အဆုံးသတ်ခြင်း၏ နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက်အဖြစ် သင့်မန်ဘာဝင်ခများအား ပြန်အမ်းငွေကို သင်ရရှိလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
၁၆.၃ အချို့သော အမေရိကန် နိုင်ငံသားများအတွက် အထူးအဆုံးသတ်ပိုင်ခွင့်
သင်သည် ပုံမှန်ရယူမှုအား ပြုလုပ်ချိန်တွင် အရီဇိုးနား၊ ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ ကွန်နက်တီကက်၊ အီလီနွိုက်စ်၊ အိုင်အိုဝါ၊ မင်နီဆိုးတား၊ နယူးယောက်ခ်၊ မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား၊ အိုဟိုင်းရိုး သို့မဟုတ် ဝစ်ကွန်ဆင်ပြည်နယ်တို့တွင် နေထိုင်သူဖြစ်ပါက အောက်ပါပြဌာန်းချက်သည် သင့်အတွက် သက်ရောက်မှု ရှိပါသည် -
(က) သင်သည် အခပေးဝန်ဆောင်မှုများအား ပုံမှန်ရယူသည့်နေ့မှစ၍ ရုံးဖွင့်ရက်သုံး (၃) ရက် (ပယ်ဖျက်နိုင်သည့်ကာလ) အတွင်း မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ဒဏ်ငွေ သို့မဟုတ် ဥပဒေအရ တာဝန်ရှိစေခြင်း မရှိဘဲ ဤသဘောတူညီချက်ကို ပယ်ဖျက်နိုင်ပါသည်။ ဤသဘောတူညီချက်ကို ပယ်ဖျက်ရန်အတွက် သင်သည် ဤသဘောတူညီချက်ကို ပယ်ဖျက်ကြောင်း သို့မဟုတ် ယင်းသို့သဘောသက်ရောက်သော စကားလုံးများကို ဖော်ပြထားသော လက်မှတ်ထိုးကာ ရက်စွဲတပ်ထားသည့် အသိပေးစာတစ်စောင်ကို မှတ်ပုံတင်စာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အသိအမှတ်ပြုစာဖြင့်ဖြစ်စေ ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ ပေးပို့ရပါမည်။ ဤအသိပေးစာကို Muslima.com, Attn: Refund Request, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australia သို့ ပေးပို့ရပါမည်။ သင်သည် သင့်ပုံမှန်ရယူမှု သဘောတူညီချက်အား ပယ်ဖျက်ရန် အသိပေးစာကို ပယ်ဖျက်နိုင်သည့်ကာလအတွင်း ပေးပို့ခြင်း သို့မဟုတ် ပို့ဆောင်ခြင်း ဖြစ်ပါက ဤပြဌာန်းချက်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်ပြုလုပ်ထားသော မည်သည့်ငွေပေးချေမှုများကိုမဆို ဖော်ပြထားသော အချိန်ကာလအတွင်း ကုမ္ပဏီက ပြန်အမ်းပေးပါမည်။
သင်သည် ပုံမှန်ရယူမှုအား ပြုလုပ်ချိန်တွင် ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ အီလီနွိုက်စ်၊ နယူးယောက်ခ် သို့မဟုတ် အိုဟိုင်းရိုးပြည်နယ်တို့တွင် နေထိုင်သူဖြစ်ပါက အောက်ပါပြဌာန်းချက်သည် သင့်အတွက် သက်ရောက်မှုရှိပါသည် -
(ခ) သင့်ပုံမှန်ရယူသည့်ကာလ မကုန်ဆုံးမီတွင် သင်သေဆုံးခဲ့ပါက သင့်ပုံမှန်ရယူမှုအတွက် သင်ပြုလုပ်ခဲ့သော မည်သည့်ငွေပေးချေမှုတွင်မဆို သင်သေဆုံးပြီးနောက်ပိုင်း ကျန်ရှိသောကာလအတွက် ပြန်အမ်းငွေကို သင့်ကျန်ရစ်အမွေပစ္စည်းအဖြစ် ရရှိနိုင်ပါသည်။ သင့်ပုံမှန်ရယူသည့်ကာလ မကုန်ဆုံးမီတွင် သင်ပြင်းထန်စွာ မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း (နှင့် ဝဘ်ဆိုက်ကို အသုံးမပြုနိုင်ခြင်း) ဖြစ်ခဲ့ပါက အောက်ပါလိပ်စာတွင် ကုမ္ပဏီသို့ အသိပေးစာကို ပေးပို့ခြင်းဖြင့် သင့်ပုံမှန်ရယူမှုအတွက် သင်ပြုလုပ်ခဲ့သော မည်သည့်ငွေပေးချေမှုတွင်မဆို သင်မသန်စွမ်းဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း ကျန်ရှိသောကာလအတွက် ပြန်အမ်းငွေကို သင်ရရှိနိုင်ပါသည် - Muslima.com, Attn: Refund Request, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australia.
၁၆.၄ ဝန်ဆောင်မှုအား သင်ဝင်ရောက်အသုံးပြုခွင့် အဆုံးသတ်ခြင်း
ကန့်သတ်ထားခြင်း မရှိသော်လည်း မည်သည့် အတုလုပ်မှု၊ စော်ကားမှု သို့မဟုတ် တနည်းနည်းဖြင့် တရားမဝင်သော လုပ်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် အခြားသူများက ဝန်ဆောင်မှုအား နှစ်သက်ကျေနပ်ခြင်းအပေါ် တနည်းနည်းဖြင့် သက်ရောက်စေမှုတို့ အပါအဝင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို မည်သည့်အကြောင်းပြချက်အတွက်ဖြစ်စေ၊ အသိပေးမှု ရှိသည်ဖြစ်စေ မရှိသည်ဖြစ်စေ၊ ဝန်ဆောင်မှုအလုံးစုံ သို့မဟုတ် တစိတ်တပိုင်းအား သင့်ဝင်ရောက်အသုံးပြုခွင့်ကို ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ပိတ်ပင်ခြင်း၊ အဆုံးသတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆိုင်းငံ့ထားခြင်း ပြုနိုင်ပါသည်။
၁၆.၅ မန်ဘာဝင်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ဖက်မှ အဆုံးသတ်ခြင်း
(ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်အရ) သင်သည် ဤသဘောတူညီမှုကို ချိုးဖောက်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ ဆုံးဖြတ်ပါက မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို သင့်မန်ဘာဝင်ခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုအား သင်ဝင်ရောက် အသုံးပြုခွင့်တို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ ချက်ချင်းအဆုံးသတ်လိုက်ခြင်း ရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အား သင်ပေးထားသော နောက်ဆုံးအီးမေးလ်လိပ်စာသို့ အဆုံးသတ်လိုက်ကြောင်း အသိပေးစာကို ပေးပို့ပါမည်။ အဆုံးသတ်ပြီးသည့် နောက်ပိုင်းကာလနှင့် သက်ဆိုင်သော မည်သည့်ကြိုတင်ပေးချေခများကိုမဆို သင့်မန်ဘာဝင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကုမ္ပဏီက ကုန်ကျခဲ့သော သို့မဟုတ် ဆုံးရှုံးခဲ့သော မည်သည့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုမဆို နုတ်ပြီးနောက် သင့်အား ပြန်အမ်းပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
၁၆.၆ အသုံးမပြုသောကြောင့် အကောင့်ကို ပိတ်ထားခြင်း
သင့်တွင် သက်ရောက်မှုရှိနေသော အခပေး ပုံမှန်ရယူမှု ရှိထားသည်မှလွဲ၍ ၆ လဆက်တိုက် ကာလကြာအောင် ဝန်ဆောင်မှုအား သင်အသုံးမပြုပါက သင့်အကောင့်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ပိတ်ထားခြင်း ရှိနိုင်ပါသည်။
၁၆.၇ Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013 အရ အဆုံးသတ်ခြင်း
သင်သည် Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013 ("သတ်မှတ်စည်းမျဉ်းများ") တွင် သတ်မှတ်ထားသော "သုံးစွဲသူ" ဖွင့်ဆိုချက်နှင့် ကိုက်ညီပြီး ယူကေတွင် နေထိုင်သူဖြစ်ကာ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုရန် စတင်ခဲ့ခြင်း မရှိမှသာလျှင် ဤကဏ္ဍသည် သင်နှင့်သက်ဆိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်စည်းမျဉ်းများသည် ဤအသုံးပြုရန် စည်းကမ်းချက်များအပေါ် သက်ရောက်ပါက စာဖြင့်ရေးသား အသိပေးမှုကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုတွင် မန်ဘာတစ်ဦးအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည့်နေ့မှ ဆယ့်လေး (၁၄) ရက်အတွင်း သင့်မန်ဘာဝင်မှုကို အဆုံးသတ်နိုင်ပါသည်။ Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013 နှင့်အညီ သင့်အားပေးထားသော ပယ်ဖျက်နိုင်သည့်ကာလ ဆယ့်လေး (၁၄) ရက်အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို သင်စတင်အသုံးပြုခဲ့ခြင်း ရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်ကို သင်တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း ယူဆမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်ကို သင်တောင်းဆိုခဲ့ပါက ဝန်ဆောင်မှုကို သင်မပယ်ဖျက်မီအချိန်အထိ ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့သော တန်ဖိုးအတွက် သင်ပေးချေရန် လိုအပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
(က) သင်သည် ဝန်ဆောင်မှုကို စတင်အသုံးပြုခဲ့ခြင်း မရှိလျှင် အဆုံးသတ်ရန် သင့်အသိပေးစာကို ကျွန်ုပ်တို့ လက်ခံရရှိခဲ့သောနေ့မှ ၁၄ ရက်အတွင်း သင်ပေးချေခဲ့သော မည်သည့်ကျသင့်ငွေများကိုမဆို ပြန်အမ်းပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ အောက်ပါတို့ကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုကို သင်စတင်အသုံးပြုလိုက်သည်နှင့် ပြန်အမ်းငွေရရှိရန် သင့်အခွင့်အရေးသည် အကျုံးမဝင်တော့ပါ -
(၁) မန်ဘာများထံသို့ မက်ဆေ့ဂျ်များပို့ခြင်း
(၂) မန်ဘာများထံမှ ရရှိသော မက်ဆေ့ဂျ်များကို ဖတ်ခြင်း
(၃) မန်ဘာများထံသို့ စိတ်ဝင်စားကြောင်း သတိပေးချက်များ ပေးပို့ခြင်း။
၁၆.၈ စားသုံးသူ အခွင့်အရေးများ အမိန့်ညွှန်ကြားချက် 2011/83/EU (CRD) အရ အဆုံးသတ်ခြင်း
သင်က စားသုံးသူ အခွင့်အရေးများ အမိန့်ညွှန်ကြားချက် 2011/83/EU ("စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ") တွင် ဖွင့်ဆိုထားသည့်အတိုင်း "စားသုံးသူ" တစ်ဦးဖြစ်ခြင်း၊ ဥရောပသမဂ္ဂတွင် နေထိုင်ခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုကို စတင်အသုံးမပြုထားခြင်းတို့ ဖြစ်မှသာလျှင် ဤကဏ္ဍသည် သင်နှင့်သက်ဆိုင်ပါသည်။ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များက ဤအသုံးပြုရန် စည်းမျဉ်းများအပေါ် သက်ရောက်သည့် အခြေအနေတွင် စာဖြင့်ရေးသား အသိပေးခြင်းဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုတွင် မန်ဘာအဖြစ် စာရင်းသွင်းထားသည့်နေ့မှ ဆယ့်လေး (၁၄) ရက်အတွင်း သင့်မန်ဘာဝင်မှုကို အဆုံးသတ်၍ ရနိုင်ပါသည်။ မန်ဘာတစ်ဦးအဖြစ် စာရင်းသွင်းလိုက်သည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုကို သင်ချက်ချင်းအသုံးပြု၍ ရနိုင်ပါသည်။
(က) စားသုံးသူ အခွင့်အရေးများ အမိန့်ညွှန်ကြားချက် 2011/83/EU နှင့်အညီ သင့်အားပေးထားသော ပယ်ဖျက်နိုင်သည့်ကာလ ဆယ့်လေး (၁၄) ရက်အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို သင်စတင်အသုံးပြုခဲ့ပါက သင့်အားကျွန်ုပ်တို့က ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် တောင်းဆိုသည်ဟု ယူဆမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်ကတောင်းဆိုသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့က ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးသည့် အခြေအနေတွင် ဝန်ဆောင်မှုကို မပယ်ဖျက်မီ အချိန်အထိ အသုံးပြုခဲ့သော ဝန်ဆောင်မှုတန်ဖိုးကို သင်ပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။ အောက်ပါတို့အနက် တစ်ခုခုကို ပြုလုပ်ပါက ဝန်ဆောင်မှုကို သင်စတင်အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု ယူဆမည် ဖြစ်ပါသည် -
(၁) မန်ဘာများထံသို့ မက်ဆေ့ဂျ်များပို့ခြင်း။
(၂) မန်ဘာများထံမှ ရရှိသော မက်ဆေ့ဂျ်များကို ဖတ်ခြင်း။
(၃) မန်ဘာများထံသို့ နှစ်သက်ကြောင်း ပေးပို့ခြင်း။
(ခ) စားသုံးသူ အခွင့်အရေးများ အမိန့်ညွှန်ကြားချက် 2011/83/EU နှင့်အညီ သင့်အားပေးထားသော ပယ်ဖျက်နိုင်သည့်ကာလ ဆယ့်လေး (၁၄) ရက်အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို သင်စတင်အသုံးမပြုခဲ့ပါက အဆုံးသတ်ကြောင်း အသိပေးစာကို သင့်ထံမှ လက်ခံရရှိခဲ့သည့်နေ့မှ ၁၄ ရက်အတွင်း သင်ပေးချေထားသော မည်သည့်အခကြေးငွေကိုမဆို ပြန်အမ်းပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
၁၇။ တာဝန်ရှိမှုမှ ကင်းလွတ်စေခြင်း
ဥပဒေတွင် ခွင့်ပြုထားသော အတိုင်းအတာအထိ သင်သည် ကုမ္ပဏီ၊ ယင်း၏စီးပွားဖက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့များ ကော်ပိုရိတ်၊ ရှယ်ယာရှင်များ၊ အရာရှိများ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ အေးဂျင့်များနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များအား အောက်ပါတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော သို့မဟုတ် အောက်ပါတို့နှင့် ဆက်စပ်၍ ကုမ္ပဏီ၊ ယင်း၏စီးပွားဖက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့များ ကော်ပိုရိတ်၊ ရှယ်ယာရှင်များ၊ အရာရှိများ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ အေးဂျင့်များမှ တာဝန်ခံရခြင်း ရှိနိုင်သော မည်သည့်တောင်းဆိုမှုများ၊ ဆုံးရှုံးမှု၊ ထိခိုက်နစ်နာမှု၊ (GST အပါအဝင်) အခွန်၊ တာဝန်ရှိစေမှု နှင့်/သို့မဟုတ် (တာဝန်ရှိမှုမှ အပြည့်အဝ ကင်းလွတ်စေခြင်း ကိစ္စတွင် ဥပဒေရေးရာ ကုန်ကျစရိတ်များ အပါအဝင်) ကုန်ကျစရိတ်များ အားလုံးအတွက်မဆို အန္တရာယ်မရှိစေဘဲ တာဝန်ရှိမှုမှ ကင်းလွတ်စေရန်၊ ခုခံကာကွယ်ရန်နှင့် ရပ်တည်ရန် သင်သဘောတူပါသည် -
(က) ဤစည်းမျဉ်းများအား သင်က မည်သည့်ပုံစံဖြင့်မဆို ချိုးဖောက်ခြင်း
(ခ) သင်နှင့်ဆက်နွယ်နေသော သို့မဟုတ် ပတ်သက်နေသော ခွင့်ပြုမထားသော မည်သည့်ပုံစံဖြင့်မဆို ဆိုက်ကိုအသုံးပြုခြင်း
(ဂ) မည်သည့်ဥပဒေကိုမဆို သင်က မည်သည့်ပုံစံဖြင့်မဆို ချိုးဖောက်ခြင်းနှင့်
(ဃ) ဆိုက်နှင့် ချိတ်ဆက်ရာတွင် သင်ပြုလုပ်ခြင်းရှိနိုင်သော မည်သည့်လုပ်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ထိန်ချန်မှုအတွက်မဆို။
မည်သည့်တောင်းဆိုမှုအား ခုခံကာကွယ်ရာတွင်မဆို အပြည့်အဝ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် သင်သဘောတူပါသည်။ သင်က တာဝန်ရှိမှုမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခြင်းနှင့် တနည်းနည်းဖြင့် ပတ်သက်သော မည်သည့်ကိစ္စအတွက်မဆို အလုံးစုံခုခံကာကွယ်ခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းပြုရာတွင် အဆိုပါ မည်သည့်တောင်းဆိုမှုအတွက်မဆို သင့်တွင်သာ တာဝန်ရှိမည်ကြောင်း (ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်မရှိသော်လည်း) မှတ်ယူရန် အခွင့်အရေးရှိပါသည်။
၁၈.၁ လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခြင်း
ဤအသုံးပြုရန် စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရန် မည်သည့်ပျက်ကွက်မှုမဆို ရှိခဲ့ပြီး အဆိုပါ ပျက်ကွက်မှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ထိန်းချုပ်နိုင်သည့် အခြေအနေများကို ကျော်လွန်နေခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါက ကုမ္ပဏီသည် မည်သည့်တာဝန်ရှိစေမှုကိုမျှ လက်မခံပါ။
၁၈.၂ ရပိုင်ခွင့်ကို စွန့်လွှတ်မှုမရှိပါ
အခြေအနေတစ်ရပ်တွင် ဤအသုံးပြုရန် စည်းမျဉ်းများအရ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသော မည်သည့် အခွင့်အရေးများကိုမဆို စွန့်လွှတ်ခြင်း ရှိပါက ယင်းသည် အခြားမည်သည့် အခြေအနေတွင်မဆို အဆိုပါ အခွင့်အရေးများကို အလိုအလျောက် စွန့်လွှတ်လိမ့်မည်ဟု ဆိုလိုခြင်း မဟုတ်ပါ။
၁၈.၃ သီးခြားစီ ခွဲခြား၍ ရနိုင်မှု
ဤအသုံးပြုရန် စည်းကမ်းချက်များအနက် တခုခုသည် မည်သည့််အကြောင်းကြောင့်မဆို အကျုံးမဝင်ခြင်း၊ အသုံးပြု၍ မရနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် တရားမဝင်ခြင်း ဖြစ်ပါက ကျန်ရှိသော အသုံးပြုရန် စည်းမျဉ်းများသည် ဆက်လက်၍ အပြည့်အဝ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိရမည် ဖြစ်ပါသည်။
၁၈.၄ သဘောတူညီမှု၏ ဘာသာစကား
ဤသဘောတူညီမှု၏ ဘာသာစကားသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီက ဤသဘောတူညီမှု၏ အင်္ဂလိပ်ဗားရှင်းအတွက် ဘာသာပြန်ဆိုမှုကို ပေးထားပါက ယင်းဘာသာပြန်ဆိုမှုသည် သင်အဆင်ပြေ လွယ်ကူစေရန်အတွက်သာဖြစ်ကြောင်း သင်သဘောတူညီပါသည်။ အကယ်၍ ဤသဘောတူညီမှု၏ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ဗားရှင်းနှင့် ဘာသာပြန်ဆိုမှု တစ်ခုအကြားတွင် မည်သည့်ကွဲလွဲမှုမဆို ရှိပါက အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ဗားရှင်းကသာ အတည်ဖြစ်ပါသည်။
ဤအသုံးပြုရန် စည်းမျဉ်းများကို အခါအားလျော်စွာ ပြင်ဆင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင် အခွင့်အရေး ရှိပါသည်။ ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် အသိပေးချက်ကို ပြုလုပ်ပြီးသည်နှင့် ပြင်ဆင်ချက်များသည် ချက်ချင်း အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အသိပေးမှုကို ပြုလုပ်ပြီးနောက်တွင် ဝဘ်ဆိုက်အား သင်ဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဤအသုံးပြုရန် စည်းမျဉ်းများကို ပြင်ဆင်ထားသည့်အတိုင်း လိုက်နာရန် သင်သဘောတူညီမှုကို ပြသခြင်းဖြစ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ဤသဘောတူညီချက်အရဖြစ်စေ၊ ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်နှင့် ပတ်သက်၍ဖြစ်စေ မည်သည့်သင့်အခွင့်အရေးကိုမဆို မည်သည့်တတိယအဖွဲ့အစည်းအတွက်မျှ သတ်မှတ်ပေးခြင်း မပြုရပါ။ ဤသဘောတူညီချက်အရဖြစ်စေ၊ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ဖြစ်စေ ယင်း၏မည်သည့် အခွင့််အရေးများနှင့် တာဝန်ရှိမှုများကိုမဆို မည်သည့်တတိယအဖွဲ့အစည်းမဆိုအတွက် သတ်မှတ်ပေးရန် ကုမ္ပဏီတွင် လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ဤသဘောတူညီမှုအရ ကုမ္ပဏီတွင် တာဝန်ရှိမှုများကို တတိယ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက် ဖြစ်သည်ဟု ယူဆပါက ကုမ္ပဏီသည် ဤသဘောတူညီချက်အရ မည်သည့်တာဝန်ရှိမှု အားလုံးမှမဆို ကင်းလွတ်စေရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဤသဘောတူညီမှု၏ ရလဒ်အဖြစ်ဖြစ်စေ၊ ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်ကို သင်အသုံးပြုမှု၏ ရလဒ်အဖြစ်ဖြစ်စေ သင်နှင့်ကုမ္ပဏီအကြားတွင် မည်သည့်အကျိုးတူပူးပေါင်းမှု၊ စီးပွားဖက်ဖြစ်မှု၊ အလုပ်ခန့်ထားမှု သို့မဟုတ် အေဂျင်စီအဖြစ် ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှု မရှိကြောင်းကို သင်သဘောတူပါသည်။
၁၈.၈ ထိန်းသိမ်းကြပ်မတ်မည့် ဥပဒေ
(က) ဥရောပသမဂ္ဂဝင် နိုင်ငံတစ်ခုတွင် နေထိုင်သူဖြစ်သော အသုံးပြုသူများသည် ဤသဘောတူညီချက်ကို အင်္ဂလန်နှင့်ဝေးလ်စ် (England and Wales) ၏ ဥပဒေများဖြင့် ထိန်းသိမ်းကြပ်မတ်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ယင်းတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်နယ်မြေမှ တရားရုံးများ၏ အထူးသီးသန့် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုပြုရန် သဘောတူညီပါသည်။
(ခ) ဥရောပသမဂ္ဂဝင် မဟုတ်သော နိုင်ငံတစ်ခုတွင် နေထိုင်သူဖြစ်သော အသုံးပြုသူများသည် ဤသဘောတူညီချက်ကို ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၊ ကွင်းစ်လန်ပြည်နယ် (Queensland, Australia) ၏ ဥပဒေများဖြင့် ထိန်းသိမ်းကြပ်မတ်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ယင်းတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်နယ်မြေမှ တရားရုံးများ၏ အထူးသီးသန့် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုပြုရန် သဘောတူညီပါသည်။
ဤအသုံးပြုရန် စည်းမျဉ်းများတွင် အောက်ပါဖော်ပြချက်များ၌ သက်ဆိုင်ရာ အဓိပ္ပါယ်များ ရှိပါသည် -
"တောင်းဆိုမှု" ဆိုသည်မှာ လူတစ်ဦးနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည်ဖြစ်စေ၊ သေချာစုံစမ်းနိုင်သည် သို့မဟုတ် မစုံစမ်းနိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ ချက်ချင်း၊ နောင်တွင် သို့မဟုတ် အကြောင်းအားလျော်စွာ ဖြစ်နိုင်သည်ဖြစ်စေ လူတစ်ဦးတွင် ကျသင့်နိုင်သော သို့မဟုတ် ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သော သို့မဟုတ် ပြန်လည်ရယူမည်ဖြစ်သော သို့မဟုတ် ချမှတ်ခြင်းရှိနိုင်သော တောင်းဆိုမှု၊ တောင်းခံမှု၊ ကုစားမှု၊ ကိုက်ညီစေမှု၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာဖြစ်မှု၊ ထိခိုက်နစ်နာမှု၊ ဆုံးရှုံးမှု၊ ကုန်ကျမှု၊ တာဝန်ရှိစေမှု၊ ဆောင်ရွက်မှု၊ တရားစွဲဆိုခြင်း၊ ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်၊ နစ်နာကြေး သို့မဟုတ် ပြန်လည်ပေးချေမှု သို့မဟုတ် တာဝန်ရှိစေမှုအတွက် တောင်းဆိုမှုတစ်ခုကို ဆိုလိုပါသည်။
"စီးပွားရေးအမြတ်ထုတ်ခြင်း" ဆိုသည်မှာ အကျိုးအမြတ် သို့မဟုတ် အကျိုးရလဒ်အတွက် အခြားမည်သည့် လုပ်ဆောင်မှုကိုမဆို ခေါင်းပုံဖြတ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဈေးကွက်တင်ခြင်း၊ အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်း၊ ဖန်တီးထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပေါင်းစပ်ခြင်း၊ သုတေသနပြုခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းနှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို ဆိုလိုပါသည်။
"ကုမ္ပဏီ" ဆိုသည်မှာ ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၊ နယူးဆောက်ဝေးလ်စ်ပြည်နယ်တွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Cupid Media Pty Ltd (ACN 104 844 564) ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ကာ Cupid Media Pty Ltd နှင့် သက်ဆိုင်သော မည်သည့်အဖွဲ့ကော်ပိုရိတ် (body corporate) သို့မဟုတ် တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သူ (associate) (အဆိုပါ အသုံးအနှုန်းများအတွက် Corporations Act 2001 (Cth) တွင် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသည့်အတိုင်း) မဆို ပါဝင်ပါသည်။
"Dating Group" ဆိုသည်မှာ SOL Holdings Limited (No. HE342740, Cyprus) နှင့် ယင်းကထိန်းချုပ်ကာ ဖောက်သည်များကို ချိန်းတွေ့ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများပေးသော မည်သည့်အကျိုးတူ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများမဆိုကို ဆိုလိုပါသည်။
"အီးယူ" ဆိုသည်မှာ ဥရောပသမဂ္ဂဟု သိရှိထားကြသော ဥရောပတွင် တည်ရှိသော အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေး သမဂ္ဂကို ဆိုလိုပါသည်။
"အီးယူနိုင်ငံ" ဆိုသည်မှာ လက်ရှိတွင် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီး အီးယူ၏ သဘောတူစာချုပ်များတွင် ပါဝင်သော မည်သည့်နိုင်ငံကိုမဆို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ကာ ဩစတြီးယား၊ ဘယ်လ်ဂျီယမ်၊ ဘူလ်ဂေးရီးယား၊ ခရိုအေးရှား၊ ဆိုက်ပရပ်စ်၊ ချက်ဇ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဒိန်းမတ်၊ အက်စ်တိုးနီးယား၊ ဖင်လန်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ ဂရိ၊ ဟန်ဂေရီ၊ အိုင်ယာလန်၊ အီတလီ၊ လတ်ဗီးယား၊ လစ်သူရေးနီးယား၊ လူဇင်ဘတ်၊ မော်လ်တာ၊ နယ်သာလန်၊ ပိုလန်၊ ပေါ်တူဂီ၊ ရိုမေးနီးယား၊ ဆလိုဗက်ကီးယား၊ စပိန်၊ ဆွီဒင်တို့ကို ဆိုလိုပါသည်။
"ကိုယ်ရေးအချက်အလက်" ဆိုသည်မှာ မည်သူဖြစ်သည်ကို သိရှိနိုင်စေသော သာမန်လူ ('အချက်အလက်နှင့် သက်ဆိုင်သူ') တစ်ဦးနှင့် ပတ်သက်သော မည်သည့် သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆို ဆိုလိုပါသည်။ မည်သူဖြစ်သူကို သိရှိစေနိုင်သော သာမန်လူတစ်ဦး ဆိုသည်မှာ အမည်၊ သက်သေခံနံပါတ်၊ တည်နေရာအချက်အလက်၊ မည်သူဖြစ်ကြောင်း အွန်လိုင်းသတ်မှတ်ချက် သို့မဟုတ် အဆိုပါ သာမန်လူ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာ၊ မျိုးဗီဇဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် လူမှုရေးဆိုင်ရာအတွက်ဖြစ်သည့် တစ်ခုနှင့်အထက်ဖြစ်သော အမှတ်အသားတို့ ကဲ့သို့သော သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ မည်သူဖြစ်ကြောင်း ဖော်ထုတ်နိုင်စေသော သူတစ်ဦးကို ဆိုလိုပါသည်။
"အခပေး ဝန်ဆောင်မှုများ" ဆိုသည်မှာ အကျုံးဝင်သော ပုံမှန်ရယူမှုတစ်ခု ရှိထားသည့် ဝဘ်ဆိုက်၏ အခပေးမန်ဘာများအတွက် အသုံးပြုနိုင်စေရန် ပြုလုပ်ပေးထားသော အသုံးအဆောင်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆိုလိုပါသည်။
"ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု ဖော်ပြချက်" ဆိုသည်မှာ ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် ရရှိနိုင်သော ကုမ္ပဏီ၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒကို ဆိုလိုပါသည်။
"ဝန်ဆောင်မှု" ဆိုသည်မှာ ဝဘ်ဆိုက်မှတဆင့် မန်ဘာများ အသုံးပြုနိုင်စေရန်အတွက် ပြုလုပ်ပေးထားသော အသုံးအဆောင်များကို ဆိုလိုပါသည်။
"အထူးကဏ္ဍ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်" ဆိုသည်မှာ လူမျိုးရေးဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ဇာတိဇာစ်မြစ်၊ နိုင်ငံရေး ထင်မြင်ချက်များ၊ ဘာသာရေး သို့မဟုတ် အတွေးအမြင်ဆိုင်ရာ ယုံကြည်မှုများ၊ ကုန်သွယ်ရေး သမဂ္ဂ မန်ဘာဝင်မှု၊ သင့်ပြစ်မှုမှတ်တမ်း၊ သာမန်လူတစ်ဦးအား မည်သူဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားစွာပြရန် ရည်ရွယ်သည့် မျိုးဗီဇနှင့် ဘိုင်အိုမက်ထရစ် အချက်အလက်၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက် သို့မဟုတ် သင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဘဝနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက် သို့မဟုတ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိမ်းညွှတ်မှုတို့ကို ဖော်ပြသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကို ဆိုလိုပါသည်။
"ဝဘ်ဆိုက်" ဆိုသည်မှာ ကုမ္ပဏီမှ ပိုင်ဆိုင်ပြီး စီမံအုပ်ချုပ်သော ဤဝဘ်ဆိုက်ကို ဆိုလိုပါသည်။
"အသုံးပြုရန် စည်းမျဉ်းများ" ဆိုသည်မှာ သင်နှင့်ကုမ္ပဏီအကြား သဘောတူညီမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ကုမ္ပဏီက အခါအားလျော်စွာ ပြင်ဆင်ခြင်းပြုလုပ်သော ဤအသုံးပြုရန် စည်းမျဉ်းများကို ဆိုလိုပါသည်။
"ကျွန်ုပ်တို့"၊ "ကျွန်ုပ်တို့ကို" နှင့် "ကျွန်ုပ်တို့၏" အသုံးအနှုန်းများ အားလုံးသည် ကုမ္ပဏီကို ရည်ညွှန်းပါသည်။